Online Porn စွဲ - ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာများ - စနစ်တကျပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2019) - Porn On Your Brain
အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)
Clin ။ Med ။ 2019, 8(1), 91; Doi:10.3390 / jcm8010091
ရုဗင်က de Alarcón 1 , ဗီယာဗြဲ de la Iglesia 1 , Nerea အမ် Casado 1 နှင့် အိန်ဂျယ်အယ်လ် Montejo 1,2,*
1 စိတ်ရောဂါကုသမှုဝန်ဆောင်မှု, ဆေးရုံClínico Universitario က de Salamanca, Salamanca ၏ဇီဝဆေးပညာသုတေသန (IBSAL) ၏ Institute မှ, 37007 Salamanca, စပိန်
2 Salamanca, EUEF, 37007 Salamanca, စပိန်တက္ကသိုလ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများကိုတစ်လှိုင်းရှိခဲ့သည်; သူတို့ထဲကတချို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်တစ်ဦးအာရုံရှိသည်။ သို့သော်အားလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများရှိနေသော်လည်း, ငါတို့နေဆဲဒီအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးရောဂါဗေဒဖြစ်လာသည့်အခါကိုယ်ရေးအချက်အလက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုံပြဿနာများပါဝင်သည်: အလွန်ကွဲပြားခြားနား symptomatology နှင့်အတူသူ့ဟာသူကိုတင်ပြစေခြင်းငှါနမူနာဘက်လိုက်မှု, ရောဂါရှာဖွေ Instruments များအတွက်ရှာဖွေမှု, ဒီကိစ္စကိုမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆန့်ကျင်, ဤ entity ကြီးမြတ်သောရောဂါဗေဒအတွင်းပိုင်းဝိုငျးစေခြင်းငှါအချက်ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်စွဲ) ။ အမူအကျင့်စှဲလေ့လာမှုတစ်ခုအကြီးအကျယ် unexplored လယ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးပြဿနာစားသုံးမှုပုံစံပြ: ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, ချွတ်ယွင်းခြင်း, အန္တရာယ်များအသုံးပြုခြင်း။ Hypersexual ရောဂါကဒီမော်ဒယ်ကိုက်ညီနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း (POPU) ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ရေးစပ်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုက "သုံးဆတစ်ဦးက" သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်, အမည်ဝှက်) စဉ်းစားစွဲများအတွက်အလားအလာနှင့်အတူမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာပြဿနာအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူဦးရေကြားတွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကရောဂါဗေဒတစ်ခုအဖြစ်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ရှိပြီးသားအသိပညာစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီ entity အကြောင်းကိုသိအနှစ်ချုပ်နှင့်နောက်ထပ်သုတေသနထိုက်အချို့ဒေသများတွင်ဖျောပွဖို့ကြိုးစားပါ။
keywords: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း; စွဲ; ဘာ; အင်တာနက်; အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; hypersexuality
အဆိုပါ DSM-5 ၏ "ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ 'chapter [တွင်" လောင်းကစား Disorder' ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ1], အယားလူသိရှင်ကြားအမူအကျင့်စွဲ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ပြင် "အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder" တွင်နေရာချခဲ့သည် ပုဒ်မ 3နောက်ထပ်လေ့လာမှုအဘို့အ -conditions ။
ရှိပြီးသားဘုံ neurobiological [ပုံရှိပါတယ်2] နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးအပါအဝင်အမျိုးမျိုးစွဲလမ်းမမှန်, အကြားမြေပြင်; ဒီ [နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုထပ်အဖြစ်ထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်4].
ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု (ထိုအပြုအမူကိုလျှော့ချဖို့ဥပမာတဏှာ, မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု), ချို့ယွင်း (အကျိုးစီးပွား၏ဥပမာကျဉ်း, အသက်ရှင်ခြင်း၏အခြားဒေသများ၏လျစ်လျူရှု), နှင့်အန္တရာယ်များကိုအသုံးပြုခြင်း (မွဲစားသုံးမှုရှိနေသော်လည်း: ဖြစ်စဉ်, အပြုအမူစွဲတစ်ဦးချင်းစီမကြာခဏတစ်ဦးပြဿနာစားသုံးမှုပုံစံပြ ထိခိုက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု၏အသိအမြင်) ။ ဤအအပြုအမူတွေကိုလည်းစွဲလမ်း (သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေး) နှင့်စပ်လျဉ်းဇီဝကမ္မစံတွေ့ဆုံရန်ရှိမရှိကပို Debate ဖြစ်ပါတယ် [4,5,6].
Hypersexual ရောဂါတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာ [အမျိုးမျိုးသောပြဿနာအပြုအမူတွေကိုလွှမ်းခြုံတဲ့ထီး Construction (အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ဘာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, တယ်လီဖုန်းလိင်, ဖှလူကြီးများ, ချွတ်ကလပ်သို့သွားရောက်, စတာတွေနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) အဖြစ်အသုံးပြုသည်7] ။ အဆိုပါရောဂါ၏တရားဝင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မရှိကတည်းကကဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်သော်လည်း၎င်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း [3% ကနေ 6% အထိ8,9].
ခိုင်မာတဲ့သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်း [ကြောင့်ရှင်းပြဖို့အဆိုပြုချက်အမျိုးမျိုးမှဦးဆောင်၎င်း၏သုတေသန, စိတ်ကူးနှင့်အကဲဖြတ်ခက်ခဲစေသည်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသောဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခံစားချက်များကို8] အဖြစ်အခြားအစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ  ကတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းသစ်နည်းပညာများ၏မြင့်တက်လာလည်းပြဿနာစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုရေကူးကန်, အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းတက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီအစွဲ [အင်တာနက်ပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (ဂိမ်းကစားခြင်း, စျေးဝယ်, လောင်းကစား, ဘာ ... ) ကိုအာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ11] အန္တရာယ်-စွဲလမ်းအပြုအမူများအတွက်အလားအလာနှင့်အတူ; ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့် [ဆိုပါတယ်အပြုအမူ၏ကွန်ကရစ်သရုပ်များအတွက်ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ်ပြုမူမယ်လို့4,12] ။ ဤသည်ယခင်ကဤအအပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ (ကြောင့်တိုးလာ privacy ကို, ဒါမှမဟုတ်အခွင့်အလမ်းမှ) စတင်တည်ထောင်စွဲအဖြစ်သွေးဆောင်ကလူသစ်ဆိုင်များတွင်များကိုမလွှဲမရှောင်တင်းမာမှုကိုဆိုလိုသည်။
ဒါ့အပြင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကျဘာအဖြစ်လူသိများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, စွဲလမ်းများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသူများကိုအင်တာနက်-တိကျတဲ့အပြုအမူတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ [အမျိုးမျိုးသောဝမ်းမြောက်စေပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့ကိုက်ညီ13] ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်တည်ရာအကြား [13,14] လူကြိုက်အများဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော [15,16,17] လက်လှမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကး၏အဆုံးမဲ့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ [13,18,19,20] ။ ဒီဖက်ရှင်အတွက်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းတခါတရံတွင် [, ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေရေးရာ, လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာဒုက္ခဟုတထစ်ချ6,21] သို့မဟုတ်မတူကွဲပြားသောအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများ, ။ ဤအဆိုးရွားသောရလဒ်များကိုရှိနေသော်လည်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မလြှော့အသုံးပြုမှုဆုံးရှုံးမှုခံစားချက်တွေကို "အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive" ဖွဲ့စည်း  သို့မဟုတ်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (POPU) ။ သည် "Triple တစ်ဦးက" အချက်များကနေဒီပြဿနာစားသုံးမှုပုံစံအကြိုးကြေးဇူးမြား .
ကြောင့်ဒီမော်ဒယ်မှ [ညစ်ညမ်း-related တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယနေ့ခေတ်ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဒီသေချာပေါက်ရောဂါဗေဒ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုမဟုတျပါဘူး21] ။ ကျနော်တို့ [ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုများအတွက်ငယ်ရွယ်အထီးလူဦးရေ access ကိုအင်တာနက်တစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိုးအစားကိုသိ24,25]; တကယ်တော့, က [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအဘို့မိမိတို့သော့ချက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်26] ။ တချို့ကညစ်ညမ်းပစ္စည်းအစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးအချိန်နှင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်စားသုံးသောအခါအကြားအချိန်ကွာဟမှု addressing, ဒီစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီ အထူးသ, ဘယ်လောက်ဟောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်  သညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်တူအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးသည့်အခါ  နှင့်လွန်ခဲ့သည့်စုံတွဲတစ်တွဲဆယ်စုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူပျိုတို့အကြားသိသိသာသာရောနှောသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု [29,30,31,32,33].
ကျနော်တို့စနစ်တကျရောဂါ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောအမျိုးမျိုးသောမကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုတွေကြိုးစားအနှစ်ချုပ်မှ POPU, လက်တွေ့သရုပ်, ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဤပုံစံကိုပံ့ပိုးသော neurobiological သက်သေအထောက်အထားများ, hypersexual ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေစိတ်ကူး၎င်း၏အဆိုပြုထားအကဲဖြတ်၏ဘာသာရပ်အပေါ်လက်ရှိစာပေပြန်လည်သုံးသပ် တူရိယာနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာများ။
2 ။ နည်းလမ်းများ
ကျနော်တို့ (PRISMA လမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ဖျော်ဖြေပုံ 1) ။ ဒီဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. အထောက်အထားများအတော်လေးသစ်ကိုယျခန်ဓာကိုပေးထားကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့အချိန်ကိုအနားသတ်မျဉ်းတွေနဲ့ကျနော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဦးစားပေးဦးစားဘာသာရပ်အပေါ်ပြီးသားထုတ်ဝေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, အသက်အကြီးဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုအသစ်ကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ဝေစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုပေါ်မှာနေရာချပေးခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးအတော်များများ Cross-referencing မှတဆင့်ပြုစုခဲ့ကြသည်သော်လည်း PubMed နှင့် Cochrane, အသုံးပြုတဲ့အဓိက databases ကိုဖြစ်ကြသည်။
ပုံ 1 ။ PRISMA စီးဆင်းမှုပုံ။
generalized အင်တာနက်စွဲအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူသူတို့က, ကွဲပြား paraphilias များ၏ညစ်ညမ်းညီမျှအပေါ်ဗဟိုပြုသူများနှင့်သူတို့အားကြောင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဓိကအားဖြင့်အွန်လိုင်းခဲ့ကတည်းကငါတို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးအတွက်ကြောင့်သာတစ်ရံအသင်းအဖွဲ့ခဲ့သောသူတို့ကိုဆောင်းပါးများကိုဖယ်ထုတ်ထား လူမှုရေးရှုထောင့်ကနေဘာသာရပ်ချဉ်းကပ်။
အင်တာနက်, အွန်လိုင်း, ( "စွဲ" နှင့် "စွဲလမ်း" နှစ်ခုလုံးအတွက်ခွင့်ပြုပါရန်) ကျဘာ, ( "ညစ်ညမ်း" နှင့် "ညစ်ညမ်း" နှစ်ခုလုံးအတွက်ခွင့်ပြုပါရန်) porn * စှဲလမျးသူ * အောက်ပါရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်၎င်းတို့၏အနကျအဓိပ်ပါယျမျိုးစုံပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် , လိင်, compulsive လိင်, hypersexuality ။ အဆိုပါရည်ညွှန်းစီမံခန့်ခွဲမှု tool ကို Zotero စဉ်းစားအားလုံးဆောင်းပါးများကိုတစ်ဒေတာဘေ့စတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
3 ။ ရလဒ်များ
3.1 ။ ကူးစက်ရောဂါ
အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလုံလောက်စွာအထူးသဖြင့်အင်တာနက်မြင့်တက်နှင့် privacy နှင့် Access လွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအခွင့်ပြုခဲ့သော "သုံးဆတစ်ဦးက" အချက်များကတည်းကတိုင်းတာခံရဖို့ခဲယဉ်းထေူ၏။ အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (GSS) ကို အသုံးပြု. အမေရိကန်အထီးလူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. Wright ရဲ့လေ့လာမှု  နှင့် (အသက်, ဆောင်များတွင်နှင့်ကာလသက်ရောက်မှုအကြားကွဲပြားခြားနားသွားသဖြင့် Wright ရဲ့အပျေါမှာချဲ့ထွင်ထားတဲ့) ဈေးရဲ့လေ့လာမှု  အနည်းငယ်အချို့ကိုပါလျှင်မသာသူတို့, အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံကြောင်းလက်ရှိသတင်းရင်းမြစ်ပါဝင်သည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးမှမတူဘဲအထီးလူဦးရေအနက်နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်း၏ခြုံငုံတိုးမြှင့်စားသုံးမှုကိုပြ။ ဤလူငယ်လူကြီးများအကြားအထူးသဖြင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များထွက်ရပ်တယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး [သည့် 1963 နှင့် 1972 အထီးဆောင်များတွင်ဤအုပ်စုများအကြားကြောင်း porn စားသုံးမှုကတည်းကအတော်လေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုခြင်း, ယခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် 1999 မှမိမိတို့အသုံးပြုမှုအပေါ်သာဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ကျဆင်းမှုပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ35] ။ အခြားတဦးတည်း 1999 လည်းညစ်ညမ်းလောင်ဖို့ 18 မှအမျိုးသမီးများသည်အသက် 26 များအတွက်စိတ်သဘောထား 45 ရန်သူတွေကိုအသက် 53 ထက်ဖွယ်ရှိ, အစားကအမှတ်အထိဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ်ဖွင့်နှစ်ခုကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိအဖြစ်သုံးကြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ယခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်  ။ အဲဒီနှစျခုအချက်အလက်များ (စားသုံးမှုအွန်လိုင်းမော်ဒယ်ရန်အော့ဖ်လိုင်းကနေ switching) နည်းပညာအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်သဘောထားတွေပြောင်းလဲနေနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပေမယ့်မူလဒေတာကိုအော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်ပါဘူးကတည်းကဒါဟာသေချာဘို့ကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ ညစ်ညမ်းပါသည်ခြေရာခံသည့်အခါ variants ။
POPU သည်၎င်း၏ပျံ့နှံ့မှုအစိုင်အခဲခန့်မှန်းချက်ပူဇော်နိုင်မပြန်လည်သုံးသပ်စာပေမရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာရှိပါတယ်။ ယေဘုယျညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းများအတွက်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ရင်းအထိထည့်သွင်းခြင်း, က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဖြစ်နိုင်သမျှသင်တန်းသားများအားဖြင့်လက်မှာခေါင်းစဉ်များရိပ်မိမညီကြောင်းသဘောသဘာဝကနေရပ်တသုတေသီများအသုံးပြုသောအကဲဖြတ် tool များ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်သဘောတူညီမှုများမရှိခြင်းစေခြင်းငှါ, တကယ်တော့အားလုံးကိစ္စရပ်များကိုလည်းဤစာတမ်းသို့ထပ်မံပြန်လည်သုံးသပ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းတဲ့ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှု, ပါဝငျသောအရာကိုပေါ်မှာ။
အဲဒါကိုတိုင်းတာရန် POPU သို့မဟုတ် hypersexual အပြုအမူပျံ့နှံ့အသုံးပြုမှုအဆင်ပြေစေရန်နမူနာပိုင်လေ့လာမှုအများစုသည်, များသောအားဖြင့်ရှာဖွေတာ, အလွန်နည်းပါးသည်အသုံးပြုသူများဒီအလေ့အထတစ်ခုစွဲစဉ်းစားပါ, သူတို့ကလုပ်ပေးပင်သောအခါလူဦးရေကွဲပြားမှု, ပင်နည်းပါးလာပေမယ့်ဒီအနုတ်လက္ခဏာရှိနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားပါ သူတို့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ တချို့ကဥပမာ:
(1) ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအကြားအပြုအမူစှဲအကဲဖြတ်လေ့လာမှုတစ်ခု [9.80 သင်တန်းသားများထဲကသာ 51% သူတို့လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းတစ်ခုစွဲရှိခဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းတွေ့ရှိရ36].
(2) ဝဘ်မေးခွန်းလွှာမှတဆင့် 1913 ပါဝင်သူတစ်နမူနာစုဆောင်းသောဆွီဒင်လေ့လာမှု, 7.6% အချို့အင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 4.5% မေတ္တာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကို '' စွဲ '' feeling ညွှန်ပြ, ဤတစ် '' ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ '' ခဲ့ကြောင်း .
[(3) 1557 ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာနှင့်အတူတစ်ဦးကစပိန်လေ့လာမှု 8.6% အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့အလားအလာအန္တရာယ်၌ပါသောတွေ့ရှိရပေမယ့်အမှန်တကယ်ရောဂါဗေဒအသုံးပြုသူပျံ့နှံ့ 0.7% ခဲ့ကြောင်း37].
ယနေ့အထိတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နမူနာနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှု 20,094 ပါဝင်သူတစ်နမူနာအတူသြစတြေးလျတစျဦးဖွစျသညျ; လူတို့သညျအဘို့ 1.2% ခဲ့သော်လည်းမိမိတို့စွဲစဉ်းစားစစ်တမ်းကောက်ယူအမျိုးသမီး 4.4%  ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်ကိုလည်း [ညစ်ညမ်းပြင်ပ hypersexual အပြုအမူလျှောက်ထား39].
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ခန့်မှန်းလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီး, နေသောခေါင်းစဉ်: လူငယ်ရွယ်စဉ်, ဘာသာရေး, မကြာခဏအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းရှာဖြစ်ခြင်း [17,37,40,41] ။ ဒီအန္တရာယ်အချက်များအချို့သည်လည်း [hypersexual အပြုအမူလူနာအားဖြင့်မျှဝေထားပါသည်39,42].
3.2 ။ Ethiopathogenical နှင့် Diagnostic Conceptual
ရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေ Conceptualizing ယနေ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အတော်ကြာကြိုးစားမှု hypersexual အပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းကြပြီနေစဉ်, အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းယခု [ဤအမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမများသဘောတူညီမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကရှင်းပြသည်9] ။ POPU နည်းပညာပါဝင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးအလွန်တိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်သည်။ ကြောင့်ပြဿနာနည်းပညာအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းနည်းပညာ) အတော်လေးမကြာသေးမီဖြစ်ခြင်းမှကျနော်တို့ကတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အရပျကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ် hypersexual အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။
တစ်အပြုအမူအဖြစ်လိင်စှာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏အလားအလာရောဂါဗေဒခြမ်းရာစုနှစ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး  ။ ကတိုက်ပိတ်ယဉျကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအထိအလေ့အထများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကတည်းကဒါကြောင့် [လုံလောက်စွာကသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေမော်ဒယ်များဖို့စိန်ခေါ်မှုကိုယ်စားပြုတယ်21] ။ ဒါဟာ [တစ်ဦးချင်းစီ stigmatize နှင့် pathologize မှချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအလွဲသုံးစားလုပ်ရှောင်ရှားရန်တစ်ကယ့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဥပဒေအဘယ်အရာကိုသတ်မှတ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လည်းခက်ခဲသည်44] ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ [တစ်ပတ်ကျော်ခုနစျပါး orgasm မှာပုံမှန်နှင့်ရောဂါဗေဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားကန့်သတ်မှုကိုသတ်မှတ်43] (စ။ 381), ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ပုံမှန်နှင့်ရောဂါဗေဒအပြုအမူပါဝငျစှာတစ်ဦးချင်းစီအကြားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ကတည်းကအရေအတွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဒီချဉ်းကပ်မှု, အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယင်း၏ခွဲခြားအတွက်တူညီနေမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု၏ဤမရှိခြင်း hypersexual အပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနဆီးတားခြင်းငှါ  နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအရည်အသွေးကိုရှုထောင့်ကိုလျစ်လျူရှု [46,47] ။ [ထားပြီး DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ hypersexual ရောဂါအဆိုပြုချက်ကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအချို့သော tools တွေကိုသုံးပြီးဤပြဿနာကိုရွေးနှုတ်တော်မူဖို့အဆိုပြုချက်, ရှိခဲ့သည်43,47].
Hypersexuality ယေဘုယျအားဖြင့် [ထီး Construction အဖြစ်ပြုမူ7] ။ ၎င်း၏ nomenclature နေဆဲယနေ့တိုင်အောင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တူညီသောအယူအဆရည်ညွှန်းကြောင်းအများအပြားဝေါဟာရများကိုကြုံတွေ့ရဖို့မကြာခဏဖြစ်ပါသည်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ။ "စွဲ" နှင့် "compulsive" စည်းကမ်းချက်များ၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုနေချိန်မှာတချို့ကစာရေးဆရာများ, အရှင်ထိန်းချုပ်မှုထဲက "အဖြစ်ကရည်ညွှန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဤအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သမျှအရှုံးသို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်း၏ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ဆွဲရန်ပိုနှစ်သက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ "[45,48,49].
အဓိပ္ပာယ်ယူနီဖောင်းမဟုတ်သော်လည်း, သူတို့သည်များသောအားဖြင့် [လက္ခဏာတွေ၏ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်46] ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်မယ်လို့မဟုတ်ရင်ပုံမှန်ရမ္မက်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏။ ဒါက [, ဖြစ်နိုင်သမျှကွဲပြားခြားနားချက်များ၏ပိုကောင်းတဲ့ရှင်းလင်းချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းသော်လည်း, paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေခွဲခြားတူညီလျက်, နှစ်မျိုးအကြားထပ်နေတုန်းပဲဆက်ရှိနေသေး45].
အများအားဖြင့် hypersexual အပြုအမူများတွင်ပါဝင်သည် [အမည်မသိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအပေါ်မှီခိုထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, ကရာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, တယ်လီဖုန်းလိင်နှင့်လာရောက်လည်ပတ်ချွတ်ကလပ်ကဲ့သို့အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်အပြုအမူတွေများမှာ43,44,49,50,51] ။ Bancroft အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ထိုအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှစ်ဦးစလုံးလူတို့သညျ "ထိန်းချုပ်မှု masturbatory အပြုအမူများကသူတို့အထဲကတစ်ဦးနီးပါးအဆမဲ့ extension ကိုအဖြစ်အသုံးပြုရန်" အဲဒီဖျော, သူတို့ကိုယ်သူတို့ရောနှောနေခြင်းနိုင်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။
hypersexual အပြုအမူရှာဖွေရေးမှာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအမြဲ [အဆိုပါ DSM ထဲမှာ "မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ" နဲ့မရရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့်1] Kafka  သ DSM-5 များအတွက်အဖြေရှာတဲ့ entity အဖြစ်အဆိုပြုဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်မျြးအခနျးကွီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပြုလုပ်ဘို့စံအစုတခုပေးအပ်သည်။ (1) လိင်ကလှုံ့ဆော်, (2) တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲ, (3) ကို obsessive-compulsive spectrum ကိုရောဂါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, (4) ကို Impulse-spectrum ကိုမမှန်၏တစိတ်တပိုင်းနှင့် (5) အနေနဲ့ ": ဤရွေ့ကားအဆိုပြုထားမော်ဒယ်များအဖြစ် hypersexual အပြုအမူပါဝင်သည် ထိန်းချုပ်မှု "အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲက။ ဤသည်အဆိုပြုချက်ကိုနောက်ဆုံးမှာကြောင့်အများအပြားအကြောင်းပြချက်မှပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်; အဓိက [ဤအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းပေါင်းစု epidemiological နှင့် neuroimaging အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပြောဆို52,53] ဒါပေမယ့်လည်းမှုခင်းအလွဲသုံးစားမှု၎င်း၏အလားအလာတစ်အဖြေရှာတဲ့စံ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရအလုံအလောက်ထားများနှင့်အလားအလာရှိသောနိုင်ငံရေးနှင့်လူ့အသက်ကိုရန်အပြုအမူ၏အရေးပါသောဧရိယာ pathologizing ၏လူမှုရေးဖုံးကွယ်  ။ ဒါဟာ [သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေများတွင်လက်ရှိစံနှုန်းများ၏အခြားနှစ်ဦးကိုယခင်သတ်မှတ်ချက်, ပက်ထရစ် Carnes နှင့် Aviel Goodman သူတို့ကနှိုင်းယှဉ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်9] ။ အားလုံးသုံး, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး၏သဘောတရားများကိုဝေမျှမိမိကိုယ်ကို / အခြားသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအပေါ်သုံးစွဲအလွန်အကျွံအချိန်ပေမယ့်အခြားဒြပ်စင်အပေါ်ကွဲပြား။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်အတွက်အနှစ်ကိုဖြတ်ပြီး hypersexual အပြုအမူ conceptualizing အတွက်သဘောတူညီမှု၏မရှိခြင်းပှေ့ထင်ဟပ်။ လောလောဆယ်အဓိကရွေးချယ်စရာ [ဖြစ်စေတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် hypersexual အပြုအမူအဆိုပြု55].
တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါရှုထောင့်ကနေ hypersexual အပြုအမူယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Coleman  ဒီသီအိုရီတစ်ခုထောက်ခံအားပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ဤအသုံးအနှုန်းအောက်တွင် paraphilic အပြုအမူများပါဝင်သည်စဉ်တွင် , သူတို့သည်အချို့သောကိစ္စများတွင်အတူတကွစေခြင်းငှါ, သူအဖြစ်ထင်ရှားစွာကြှနျုပျတို့သညျဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုခငျြအဘယ်သို့သောအရာ nonparaphilic CSB, ကနေခွဲခြား။ စိတ်ဝင်စားစရာ nonparaphilic hypersexual အပြုအမူ [များသောအားဖြင့်အချို့ paraphilias ထက်အဖြစ်မကြာခဏလျှင်မပိုဖြစ်ပါတယ်43,58].
သို့သော် CSB ပိုမကြာသေးမီအဓိပ္ပာယ်များသောအားဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောနိုင်ပါတယ်ကြောင်းမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်း: အများဆုံး [ညစ်ညမ်းနှင့်ကရာ, compulsive Cruise နှင့်မျိုးစုံဆက်ဆံရေး (22-76%) ၏ compulsive အသုံးပြုနောက်တော်သို့လိုက်ခံရခြင်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြ9,59,60].
hypersexuality နှင့်ထိုကဲ့သို့သော obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) အဖြစ်အခြေအနေများနှင့်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အကြားအဓိပ္ပါယ်ထပ်ရှိပါတယ်စဉ်တွင်  အချို့ကွာခြားမှုလည်းရှိပါတယ်ထောက်ပြ: ဥပမာ, OCD အပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မတူဘဲဆုလာဘ်ပါဝင်ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, compulsive မြားတှငျပါဝငျခွငျးစဉ် [OCD လူနာတွေအတွက်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ,62] hypersexual အပြုအမူများသောအားဖြင့် [သည့်လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ပြီးနောက်အပြစ်ရှိတယ်နှင့်နောင်တခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်နေသည်63] ။ ဒါ့အပြင်တခါတရံလူနာရဲ့အပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးနိုငျသော Impulse တစ်ခါတစ်ရံ (ဥပမာ, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံပတ်သတ်ပြီးအတွက်) CSB အတွက်လိုအပ်သောသတိထားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ  ။ Goodman [ကြောင်းစွဲရောဂါလက္ခဏာများ neurobiological ယန္တရားများ (serotoninergic, dopaminergic, noradrenergic နှင့် opioid စနစ်များ) ခံရမှုခံရအတူ, (စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချရေးပါဝင်) ကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါနှင့် (ဆန္ဒပြည့်ပါဝင်) ကိုထကြွလွယ်သောရောဂါ၏လမ်းဆုံမှာအိပ်ထင်65] ။ Stein [အများအပြား ethiopathogenical ယန္တရားများပေါင်းစပ်ပြီးတစ်မော်ဒယ်နှင့်အတူသဘောတူနှင့်ဤ entity လေ့လာဖို့တစ်ဦး Credit: ABC မော်ဒယ် (အကျိုးသက်ရောက်စေ dysregulation, အမူအကျင့်စွဲနှင့်သိမြင်မှု dyscontrol) အဆိုတင်သွင်း61].
တစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူရှုထောငျ့မှ, hypersexual အပြုအမူစွဲ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာမျှဝေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤရွေ့ကားရှုထောင့်က, DSM-5 သည်နှင့်အညီ , အဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြဿနာစားသုံးမှုပုံစံကိုရည်ညွှန်းအွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံး, hypersexual အပြုအမူအသုံးချ [6,66,67] ။ ဒီလိုလူနာအတွက်သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်နိုင် [တစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်ဤ entity characterizing အတွက်သော့ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,45] ။ ဘာ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းမကြာခဏအမူအကျင့်စွဲအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ် [13,68].
ဒီ entity မှလျှောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "စွဲ" နေဆဲအကြီးအငြင်းအခုန်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ Zitzman [ဟူသောဝေါဟာရကိုစွဲသုံးစွဲဖို့တော်လှန်ရေး "စွဲလမ်း၏အခြားပုံစံများနှင့်အတူလက်ခဏာနဲ့အဖြေရှာတဲ့စာပေးစာယူမဆိုမရှိခြင်းထက်ယဉ်ကျေးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်ကြဲခြင်းနှင့်အလိုလိုကျပိုတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု" ကြောင်းစဉ်းစား69] ။ သို့သော်အသုံးအနှုန်းကဆန္ဒပြည့်နှင့် hedonist အပျော်အပါးတစ်ခုတာဝန်မဲ့ရှာဖွေရေးများအတွက်မျှတမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်ကတည်းကသတိနဲ့အသုံးပြုရရန်လိုအပ်သည်, ထိုသို့အပေါ်နှောင့်အယှက်အကျိုးဆက်များအပြစ်တင်ကြပါတယ်။
ရှည်လျားသော hypersexual အပြုအမူများ၏ရောဂါရှာဖွေရေးကျော်ပက်ထရစ် Carnes ဧလိ Coleman အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိခဲ့သည်။ Coleman [မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအသုံးပြုပုံ hypersexuality စိုးရိမ်စိတ်အချို့ကိုအမျိုးအစားကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်းမောင်းနှင်ခံရဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်56] ခုနစ်ခု Subtype (သူတို့ထဲကတဦးတည်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ခြင်း) တွင်ပြုလုပ်ခွဲခြားပြီးလျှင်  ( "အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဓါတ်များနဲ့ရောဂါဗေဒဆက်ဆံရေးဟာ" အဖြစ်စွဲသတ်မှတ်သူ) Carnes အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်လက်အပြုအမူ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအာရုံစိုက်, လောင်းကစားကဲ့သို့အခြားအပြုအမူစှဲဖို့ပုံသဏ်ဍာနျကိုတွေ့နေချိန်မှာ .
Kraus အားဖြင့်စာပေ၏တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်  ဤပုံသဏ်ဍာနျနေသော်လည်း, အယူအဆရဲ့နားလည်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွာဟချက်တစ်ခုစွဲအဖြစ်က၎င်း၏ခွဲခြားရှုပ်ထွေးကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြီးစားပျံ့နှံ့၏အရေအတွက်, longitudinal နှင့်လက်တွေ့ဒေတာ (အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်၎င်း၏အဖြေရှာတဲ့ကန့်သတ် defining), neuropsychological neurobiological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဒေတာများကထောက်ခံအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သောကုသမှုစိစစ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဆီသို့ဦးတည်ရည်ရွယ်နေကြပြီး, အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အဓိကအချက်အဖြစ် hypersexual အပြုအမူအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာထောက်ပြသည်။
အင်တာနက်မြင့်တက်လိင် interaction ကအတှကျဖြစ်နိုင်ခြေမဟုတ်, ကိုယ့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း (webcam, ပေါ့ပေါ့လိင်က်ဘ်ဆိုက်များ) တိုးပွားစေပါသည်။ တောင်မှအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူ၏အခြားအမျိုးအစားများများအတွက်ပြွန် (ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်း) ကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော entity ပါဝငျရှိမရှိနေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေသည်  ။ အမှုဟောင်းလျှင်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ယခင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအလွန်ကောင်းစွာက၎င်း၏အွန်လိုင်းရှိသော counterpart လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ထဲကအများစုဟာနှိုင်းယှဉ်နိုင်ကာအော့ဖ်လိုင်းဗားရှင်းမရှိကြပါဘူးကတည်းကအကောင့်သို့ (အော့ဖ်လိုင်းသာရှိပြီးပြည်ပမှ) အွန်လိုင်း characterizing ထူးခြားသောအချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုယူကြောင်းမျက်မြင်လက်တွေ့ဆင်းသက်လာစံများအတွက်လိုအပ် [လက်ရှိရှိပါတယ်73] ။ ဒီတော့ဝေး, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါ [အွန်လိုင်း dissociation ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကဲ့သို့အသစ်သောဖြစ်ရပ်၏ဖျောပွထားတှေရှိခဲ့တယျ74] "ညှိအချိန်နှင့် depersonalization အတူစေ့စပ်သည့်အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု detach လုပ်လိုက်သောလိမ့်" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာ။ ဤသည် dissociation ပြီးသား [အခြားအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး75] ဘာပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်နှင့်လိင်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်သောအယူအဆပံ့ပိုးသော .
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြှနျုပျတို့သညျ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါရှာဖွေ entity က "ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန် 'chapter [အတွက် ICD-11 ၏လာမည့်ပြတ်သား edition အတွက်ထည့်သွင်းထားကြောင်းကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းရန်ရှိသည်77] ။ အဓိပ္ပါယ်မှာတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ် https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048.
အဆိုပါ ICD-11 ၌ဤအမျိုးအစားများ၏ပါဝင်မှုဤပြဿနာများ၏ဆက်စပ်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နှင့်၎င်း၏လက်တွေ့ utility ကိုထေူ, ကြီးထွားလာသော်လည်းပေမယ်သေးအပြီးအပြတ်ကောက်ဒေတာ [စနစ်တကျတစ်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါကြောင့် categorizing အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်စေခြင်းငှါ72] ။ ဒါဟာ [လူနာရှာကြံကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သောအပြစ်ရှိတယ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် addressing များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ tool တစ်ခု (သေးသနျ့စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်) များကိုယုံကြည်78] နှင့်လည်း [သည့် CSB အများစုသင့်လျော်သောခွဲခြားနှင့်အချို့သောဒေသများရှိအချက်အလက်များ၏င်း၏ကန့်သတ်ငွေပမာဏ ပတ်သက်. ဖြစ်ပွားနေသောငြင်းခုံမှုများထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ55,71] (စားပွဲတင် 1) ။ ဤထပ်တိုးဤပြဿနာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပေါ်မှာတိုးချဲ့, တဦးတည်း key ကိုအမှတ်ခြောသူ့ရဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမျိုးကွဲဖြစ်ခြင်းဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စားပွဲတင် 1 ။ DSM-5 နှင့် ICD-11 hypersexual အပြုအမူခွဲခြားဖို့ချဉ်းကပ်။
3.3 ။ လက်တွေ့ manifest
POPU ၏လက်တွေ့သရုပ်သုံး key ကိုမှတ်ထချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်:
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အချို့သောလေ့လာမှုတွေညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏နည်းနည်းသက်သေအထောက်အထားတွေ့ပြီစဉ် , အခြားသူများ [ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမြင့်တက်လူငယ်များကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာရှင်းပြသော့ချက်အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဆိုပြု80] ။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုခံစားခဲ့ရသူကိုလူနာ 60% တွေကတော့ [ညစ်ညမ်းနှင့်အတူဤပြဿနာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ8] ။ တချို့က [ညစ်ညမ်းထိတွေ့မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုရှာဖွေရှားပါးကတည်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြား causation, တည်ထောင်ရန်ခက်ခဲကြောင်းငြင်းခုန်81] နှင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသုတေသနဒီဇိုင်းကိုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။
Psychosexual မကျေနပ်မှု: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်  တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ရဲ့, တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဖိအားများနှင့်လျော့နည်းအမှန်တကယ်လိင်ပိုအရေးပါဖြစ်ခြင်း  ပို. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းနှင့် paid လိင်အပြုအမူအတွက်ပါဝငျ  ။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းဘက်သောအခါဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်မှတ်ချက်ချနေသည်  ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုဟာအလွန်ဆင်တူလမ်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားလျှို့ဝှက်တူသောအဓိကအချက်မျှဝေ  ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရောဂါဗေဒညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံထားတယ်, ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း [ကြောင့်တစ်ဦးစွဲဖြစ်လာသည်သာအခါ, သူ့ဟာသူဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ24] ။ ဤသည်မိန်းမတို့အဘို့အမျိုးသမီးဗဟိုပြုညစ်ညမ်းနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြနိုငျ .
Comorbidities: hypersexual အပြုအမူပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, ခံစားချက်ရောဂါအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စိုးရိမ်ပူပန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်  ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုလည်း [POPU လျှောက်ထား88] မှာလည်း [ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, အရက်သို့မဟုတ်ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်း, ဆေးလိပ်သောက်သူနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိ41] နှင့်ပြဿနာ video-game ထဲကအသုံးပြုမှု [89,90].
အချို့အလွန်တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအကျိုးစီးပွားရှိခြင်း [အစီရင်ခံပြဿနာများအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်17] ။ ဤအလက်တွေ့ features တွေတကယ်စွဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိသည့်ဘာသာရပ်များမှတိုက်ရိုက်ကျဘာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ကြောင့်များ၏အကျိုးဆက်လျှင်၎င်းသည် [အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်91].
3.4 ။ စွဲလမ်းမှုမော်ဒယ်ပံ့ပိုး Neurobiological အထောက်အထား
POPU အကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းထားတဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်. , ဒီဘာသာရပ်အပေါ်အဓိကဒေတာတုန်းပဲ [အသေးစားနမူနာအရွယ်အစား, တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးလိင်ကွဲနမူနာများနှင့် Cross-Section ဒီဇိုင်းများအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်71] မလုံလောကျ neuroimaging နှင့် neuropsychological လေ့လာမှုများနှင့်အတူ  ဖြစ်ကောင်း, အယူအဆရေးရာဘဏ္ဍာရေးနှင့် Logistic အတားအဆီးကြောင့်။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်လုပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်စဉ်များအပြင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူဤမပွုနိုငျ; ဒီ [ယင်း၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကန့်သတ်စေခြင်းငှါ72] ။ hypersexual အပြုအမူ၏သုတေသနနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိအသိပညာကွာဟချက်အဖြစ်သူတို့ကိုဖြေရှင်းဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှု, ကျွမ်းကျင်စွာ [ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် Kraus '' ဆောင်းပါး၌အကျဉ်းချုံးထားပါသည်71] ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမှာတွေ့ရတဲ့လေ့လာမှုများအများစုဟာညစ်ညမ်းတစ်ဦးတည်းသာသူ့ရဲ့မှတ် accessories များဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ hypersexual အပြုအမူစပ်ဆိုင်သောအ။
ဒါကသက်သေအထောက်အထားစွဲ-related neuroplasticity အပြောင်းအလဲများကိုတို့တွင်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးဖြစ်ပေါ်နေသောနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခံနေရပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် frontotemporal နှောက်နှင့်လိုလားသူ dopaminergic ဆေးဝါးအတွက်ပြီးသားလေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ် Dopamine အဆင့်ဆင့် [, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား92,93].
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူစွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်အသစ်အဆန်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပါဝငျသော "supranormal လှုံ့ဆော်မှု" (သက်တမ်းနိုဘယ်ဆုရှင် Nikolaas Tinbergen ခြင်းဖြင့်စတင်သုံးစွဲ) [ခြင်းဖြင့် amplified စေခြင်းငှါ94] ။ ဤဖြစ်စဉ်ပါမယ် (ဒီအမှု၌ကြောင့်အများအားဖြင့်ယနေ့စားသုံးသည်လမ်း၎င်း၏အွန်လိုင်း form မှာညစ်ညမ်း) တစ်ခု evolutionarily ဖွံ့ဖြိုးပြီးမျိုးဗီဇတုံ့ပြန်မှု override အတုလှုံ့ဆော်မှုလုပ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါသီအိုရီကိုသူတို့အလားအလာကြောင့်ထိုက်တစ်ခုစွဲလမ်း mode သို့ပြောင်းလဲအောင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲအဖြစ်ဘိုးဘေးဘီဘင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြုံတွေ့သောအရာကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကဆုလာဘ် system ကိုကိုသက်ဝင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ  ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤရှုထောင့်ကနေအွန်လိုင်း porn ကိုစဉ်းစားလျှင်, ငါတို့သည်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမှတူညီမြင်နေစတင်နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတစ်လွှားရှုလေ့လာဗိုလ်မှူးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ [စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အုတ်မြစ်95] အပါအဝင်:
အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality) 
ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှု system ကို 
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်, electroencephalography (EEG), neuroendocrine နှင့် neuropsychological: စွဲလေ့လာဒါတွေကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40 လေ့လာမှုများမှတဆင့် hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်လူနာနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါပြီ။
ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ mirror ရာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်သောလူနာများအကြားဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့တဲ့အခါ, hypersexual ဘာသာရပ်များ [ သာ. ကြီးမြတ်ကြီးဖြစ်သော (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အညီ) like နှိပ်ခြင်းနှင့်လိုသောအကြားကွဲပြားခြားနားမှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ), ပြသကြ8,100] ။ တစ်နည်းအားဖြင့်အဲဒီဘာသာရပ်တွင်ပိုမိုသာသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue အဘို့အလိုဆန္ဒ, ဒါပေမယ့်မရ generalized လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလည်းမရှိ။ ဒါက [သူ့ဟာသူထို့နောက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြ46].
အလိုဆန္ဒ signalizing ဒီအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအထောက်အထား prefrontal cortex အထူးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်  နှင့် amygdala [102,103] အကဲဆတ်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ခြင်း။ ထိုအဦးနှောက်ဒေသများတွင် activation ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်များဆင်တူဖြစ်တယ်  နှင့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသယ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အဖြစ်တနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့, ဒါပေမယ့်မရညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်လျော့နည်းသွားအလိုဆန္ဒ [ရှိပါတယ်105] စိုက်ထူအရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုလည်းထင်ဟပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု  ။ ဤသည် desensitization ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, သံမဏိရဲ့လေ့လာမှု [(ဘာသာရပ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲများအတွက်ပြ၏မရှိခြင်း, တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုမပြုမေးခွန်း၏အသုံးပြုမှုကို) စဉ်းစားရန်အကြိမ်ကြိမ်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုပါရှိသည်106] ။ Prause နေဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှု , တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူဤအချိန်ဤအလွန်တွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ။ ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလိင်ကွဲအမျိုးသမီးအတွက် corroborated ပြီ  နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားအနမူနာ .
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ဤအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [အစောပိုင်း hypersexual တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မြင်သာထင်သာဖြစ်ပါတယ်110], ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုရန်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအလှည့် desensitization အတွက်ပြသထားတယ် [111,112] ။ ဒါက [ဖြစ်နိုင်သည် သာ. dorsal cingulate ကကမကထပြုခဲ့ဆုလာဘ်စနစ်များ, တစ် downregulation ဆိုလိုတယ်107,113,114] ။ အဆိုပါ dorsal cingulate ဆုလာဘ်ထားချက်အရနှင့်အသစ်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကတည်းကထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားယခင်လှုံ့ဆော်မှုဖို့လေ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြသည်။ ဒါက [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်တိုးမြှင် preference ကိုအတွက်ရလဒ်များ115] ကျော်လွှားရန်ကြိုးစားမှုအစားအမှန်တကယ်လိင်၏ဤအပြုအမူကိုရှေးခယျြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်ပိုပြီး (အသစ်) ညစ်ညမ်းများအတွက်ရှာဖွေရေးမှတဆင့်လေ့နှင့် desensitization ကဆိုသည်အဖြစ်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါအရာ .
အသစ်အဆန်းရှာမှာဤအကြိုးစားမှု ventral striatal reactivity ကိုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ  နှင့် amygdala  ။ ဒါဟာ [မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ညစ်ညမ်း၏မြင်ကွင်းကိုလည်း သာ. ကြီးမြတ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကြောင်းလူသိများသည်99] အထူးသဖြင့် ventral striatum အတွက် [116,118] ဆုလာဘ်ထားချက်အရအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သော .
သို့သော် ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှု [လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်103,113]; prefrontal cortex နှင့် amygdala တို့အကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းလည်း [လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်117] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, hypersexual ဘာသာရပ်များ [caudate နှင့်ယာယီ cortex ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအကြားလျှော့ချ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ကဤဒေသများရှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုကိုပြသကြ120] ။ ထိုအပြောင်းလဲအားလုံးသည်လိင်ပိုင်းအပြုအမူ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရှင်းပြနိုင်ဘူး။
ထိုမှတပါး, hypersexual ဘာသာရပ်များ [သည့် amygdala တစ်ခုတိုးလာအသံအတိုးအကျယ်ပြသ117] တစ်လျော့နည်းသွား amygdala အသံအတိုးအကျယ်ကိုပြသသောပစ္စည်းဥစ္စာတစ်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူသူတို့က, မတူဘဲအတွက် ; ဒီခြားနားချက်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ neurotoxic အကျိုးသက်ရောက်မှုများကရှင်းပြနိုင်ဘူး။ hypersexual ဘာသာရပ်များ, တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ volume ထဲမှာ [(အထူးသဖြင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီ supporting) စွဲဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူထပ်ထင်ဟပ်သို့မဟုတ်ထိုသို့သောအမူအကျင့်စွဲသူ့ဟာသူအဖြစ်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုယန္တရားများ, ရန်အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်122].
ဤရွေ့ကားသုံးစွဲသူများအားလည်း [အဓိကအားဖြင့် hypothalamus-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တစ်အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြခဲ့ကြ122] ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုပွောငျးလဲ mirror တဲ့လမ်းပါ။ ဤရွေ့ကားကိုပြောင်းလဲ [corticotropin-releasing-Factor များကဲ့သို့စွဲလမ်းမောင်းဂန္ရောင်ရမ်းပြုပြီပေါ်တွင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို (CRF) ၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း123] ။ ဒါကဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းအယူအဆ hedonic နှင့် anhedonic နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်ရလဒ်များမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopaminergic ဗီဇကြောင့်ထိခိုက်နေကြစဉ်းစားများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကတခြားသမ္မတလောင်း neurotransmitter-related ဗီဇ polymorphic  ။ လိင်စွဲအတွက်မြင့်မားအကျိတ် necrosis အချက် (TNF) ၏အထောက်အထား hypersexuality အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံထဲမှာ TNF အဆင့်ဆင့်နှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များအကြားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်စပ်မှုနှင့်အတူလည်းရှိပါသည် .
3.5 ။ Neuropsychological အထောက်အထား
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ဤပွောငျးလဲများ၏သရုပ် ပတ်သက်. များတွင်အများဆုံး neuropsychological လေ့လာမှုများအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်အချို့ကြင်နာပြပါ [126,127] ဖြစ်နိုင်သည် prefrontal cortex ပွောငျးလဲ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်  ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဖို့လျှောက်ထားသောအခါ, [ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်129,130].
ဒီဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပါဝင်သည်: Impulse [131,132] သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်အာရုံကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း impedes ကြောင်းသိမြင်မှုကျောမှု [120,133,134], ဆင်းရဲတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း [130,135] အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များနှောင့်ယှက်  စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်လိင်နှင့်အတူအလွန်အကျွံအတွက်အဆက်မပြတ်အတွက်လိုငွေပြမှု  ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်အခြားအပြုအမူ (ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့) စှဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်အပြုအမူများဆင်တူကြသည်  ။ အချို့လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက် [ဤအတွေ့ရှိချက်ဆန့်ကျင်58], ဒါပေမယ့် (ဥပမာ, အသေးစားနမူနာအရွယ်အစား) နည်းစနစ်အချို့န့်အသတ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
hypersexual အပြုအမူနှင့်ကျဘာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါသောအချက်များချဉ်းကပ်, သူတို့ထဲကအတော်များများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ [cue-reactivity ကို, အပြုသဘောအားကောင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်104,109,136,138,139] porn စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကယန္တရားအဖြစ်။ သို့သော်နောက်ခံအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများရှိစေခြင်းငှါ  ကဲ့သို့: အချို့ predisposed တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏ (1) အခန်းကဏ္ဍကို [40,141,142,143] ကရို Impulse ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ [144,145] သို့မဟုတ်ပြည်နယ် Impulse  နှင့် (2) ချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကို [147,148,149].
3.6 ။ ဟောကိန်း
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစေရန်ရေရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူအသုံးပြုမှုဘာသာရပ်များရည်ညွှန်းသည့်လေ့လာမှုများအများစုဟာ [34,81,113,114] ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လက်တွေ့သရုပ်ဒီ maladaptive အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏တိုက်ရိုက်နှင့်အချိုးကျအကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ [ကျနော်တို့ causation တည်ထောင်ရန်ထိန်းချုပ်မှုရယူအတွက်အခက်အခဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ပေမယ့်တချို့အမှုအစီရင်ခံစာများကဒီအပြုအမူကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်စွန့်ခွာညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့် psychosexual မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအကြံပြု79,80] နှင့်ပင်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ; ဒီအရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲအတန်ငယ် Reversible လုပ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပေသည်။
3.7 ။ အကဲဖြတ် Tools များ
အများအပြားကစိစစ်တူရိယာ CSB နှင့် POPU addressing များအတွက်တည်ရှိ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တုံ့ပြန်မယ့်ရိုးသားမှု, သမာဓိအပေါ်အားကိုး; ဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်ဒါကြောင့်ပုံမှန် Psychiatry စိစစ်စမ်းသပ်မှုထက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသဘောသဘာဝမှအများဆုံးနှိမျ့ခစြများမှာကတည်းက။
hypersexuality အဘို့, 20 စိစစ်မေးခွန်းနှင့်လက်တွေ့အင်တာဗျူးကျော်ရှိပါတယ်။ အများဆုံးသိသာ၏အချို့ [Carnes အားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့်လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (SAST) တို့ပါဝင်သည်150] နှင့်၎င်း၏အကြာတွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်း SAST-R ကို , အ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory (CSBI) [152,153] နှင့် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory (HDSI)  ။ အဆိုပါ HDSI မူလက hypersexual ရောဂါ၏ DSM-5 လယ်ကွင်းအဆိုပြုချက်ကိုများ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စံနှင့် cutoff ရမှတ်၏ပွုပွငျပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. သည့်ပင်ကိုယ်မူလဂယက်၏နောက်ထပ်စူးစမ်းလိုအပ်နေပါသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လက်ရှိ [အင်အားအကောင်းဆုံး psychometric ထောက်ခံမှုရရှိထားသူများနှင့် hypersexual ရောဂါတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခိုင်လုံသောတူရိယာဖြစ်ပါတယ်151].
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများအတွက်သကဲ့သို့, လူသုံးအများဆုံးစိစစ် tool ကိုအင်တာနက်ကိုလိင်-စိစစ်စမ်းသပ် (ISST) ဖြစ်ပါသည်  ။ ဒါဟာ 25 dichotomic (Yes / No) မေးခွန်းများကိုမှတဆင့် (အွန်လိုင်းအွန်လိုင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ-လူမှုရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ-အထီးကျန်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်နှင့်အကျိုးစီးပွား) ကိုငါးကွဲပြားအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများဆိပ်သာရစေရန် [စပိန်အတွက်ပိုပြီးကြံ့ခိုင် validation ကိုအတူဆန်းစစ်ခဲ့156] posterior လေ့လာမှုများများအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် .
အခွားသောမှတ်သားလောက်သောတူရိယာ [သည့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS) များမှာ158] (အပါအဝင်: ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများ, အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, ထိန်းချုပ်ခြင်းအခက်အခဲများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများလွတ်မြောက် / ရှောင်ရှားခြင်းအတွက်သုံး) POPU လေးရှုထောငျ့ကိုတိုင်းတာပေးသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှအဆင်ပြေအောင်ရေတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှု (s-IAT-လိင်) [159POPU နှစ်ခုအတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်း] တစ်ဦး 12-ကို item မေးခွန်းလွှာများနှင့်ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစာရင်း (CPUI-9) .
(9) access ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, (1) ရိပ်မိ compulsive, နှင့် (2) စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ: အဆိုပါ CPUI-3 သုံးဖက်မြင်တန်ဖိုး။ ပထမတော့ [psychometric ဂုဏ်သတ္တိများလာအောင်ရှိသည်ဟုယူဆ9], ဒီစာရင်းကပိုမကြာသေးမီကစိတ်မချရဖြစ်သက်သေပြထားပါတယ်: အရှင်တစ်ခုစွဲအကဲဖြတ်အတွက်ပိုင်မထားတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ၏ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ" ရှုထောင်လိပ်စာအဆင့်ဆင့်၏ပါဝင်မှုနှင့်အထက်ရမှတ် skews  ။ ဒီရှုထောင်မရှိဘဲစာရင်းလျှောက်ထားခြင်းတိကျစွာအချို့သောအတိုင်းအတာအထိအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှရောင်ပြန်ဟပ်မှပေါ်လာသည်။
လတ်တလောတစ်ခုမှာ [သည့်ညစ်ညမ်းပြဿနာစားသုံးမှုစကေး (PPCS) ဖြစ်ပါသည်162] Griffith ကခြောက်အစိတ်အပိုင်းစွဲမော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီး  ကစွဲ, ခိုင်မာတဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူညစ်ညမ်းသာပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာပါဘူးသော်လည်း။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသုံးပြီးအတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်း POPU ၏အခြားအစီအမံ , [သည့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory (PCI) တို့ပါဝင်သည်164,165], အ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (CPCS)  နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံတဏှာမေးခွန်းလွှာ (PCQ)  ပေးသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအမျိုးမျိုးအကြားဆက်စပ်အစပျိုးအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
tools တွေ Self-အစပျိုးမဟာဗျူဟာများမှတဆင့်အပြုအမူစွန့်ခွာဖို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' အဆင်သင့်အကဲဖြတ်ဘို့လည်းရှိပါတယ်  ဒါလုပ်နေတာအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုတစ်ဦးအကဲဖြတ်  အထူးသဖြင့်သုံးအလားအလာ relapse တွန်းအားဖော်ထုတ်: (က) လိင်စိတ်နိုးထ / ပျင်း / အခွင့်အလမ်း, (ခ) မူးယစ် / တည်နေရာ / လွယ်ကူစွာနှင့် (ဂ) အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု။
3.8 ။ ကုသမှု
နေဆဲမေးခှနျးမြားစှာ hypersexual အပြုအမူနှင့် POPU ၏စိတ်ကူး, အကဲဖြတ်များနှင့်အကြောင်းတရားများနှင့်စပ်လျဉ်းကျန်ကြွင်းသောပေးထား, ဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုရွေးချယ်စရာသုတေသနမှအတော်လေးအနည်းငယ်ကြိုးစားမှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်နမူနာအရွယ်အစားများသောအားဖြင့်အသေးစားနှင့်လည်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ကြသည်လက်တွေ့ထိန်းချုပ်မှုချို့တဲ့နေကြသည်, ထိုသုတေသနနည်းစနစ်များကွဲပြားလျက်ရှိသော, အတည်မပြုနိုင်သောနှင့် [ပုံတူပွားမဟုတ်170].
အများအားဖြင့်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်-အမူအကျင့်, ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ်နှင့် pharmacologic နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ပြီး [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ကုသမှုအများဆုံးထိရောက်စဉ်းစားပေမယ့်ဒီ Non-တိကျတဲ့ချဉ်းကပ်မှုဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာ၏မရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်နေသည်9].
3.8.1 ။ Pharmacological သို့ချဉ်း ကပ်.
အဆိုပါလေ့လာမှုများအရှင်ဝေး paroxetine နှင့် naltrexone အပေါ်ဗဟိုပြုပါပြီ။ POPU အပေါ် paroxetine ပါဝင်သောတစ်ခုမှာအမှုစီးရီး [အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုလျော့ချဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်နှိုက်ခြင်းအားဖြင့်အမူအကျင့်ကိုလျှော့ချရန်ပျက်ကွက်171] ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖန်တီးရန် SSRIs သုံးပြီး [ပုံထိရောက်သောမရှိ, လက်တွေ့အတွေ့အကြုံအရသိရသည်သာ comorbid စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်အသုံးဝင်172].
POPU ဆက်ဆံဖို့ naltrexone ပါဝင်သောလေးကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာများဖော်ပြထားပါပြီ။ ယခင်တွေ့ရှိချက် [naltrexone အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့် hypersexual ရောဂါများအတွက်အလားအလာကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ173,174] သီအိုရီအပြုအမူနှင့်အတူဆက်စပ် Euphoria ပီတိပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်မတရားသောနှင့်ရမ္မက်ကိုလျှော့ချ။ naltrexone အတူ randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးသောဤဘာသာရပ်များအတွက်သေးမရှိပေမယ့်, လေးကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ ကောင်းသော [ထံမှကွဲပြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချအတွက်ရရှိသောရလဒ်များ175,176,177] အလယ်အလတ်မှ ; က naltrexone မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်မည်မျှရှင်းလင်းဒါမှာအနည်းဆုံးသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတွက်လူနာလည်း [sertraline လက်ခံရရှိ176].
3.8.2 ။ Psychotherapeutic သို့ချဉ်း ကပ်.
ခြော, psychotherapy အပြည့်အဝမယ့်အပြုအမူနားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်နှင့်အပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့ tool ကိုဖွစျနိုငျပါတယျ။ သိမြင်မှု-အပြုအမူကုထုံး (CBT) [hypersexual ရောဂါကုသအသုံးဝင်သောဖြစ်ဖို့အများကြီး Clinician နေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်179] ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခု [အပြုအမူတစ်ခုလျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက်180], အ comorbid စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေပြင်းထန်မှုနှင့်အသက်တာ၏ယေဘုယျအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ခဲ့သည်ကိုပင်လျှင်။ ဒါက [မျှသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချအရေးကြီးဆုံးကုသမှုရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုမပြုစေခြင်းငှါအကျိုးစီးပွားအယူအဆတက်တတ်၏170] ။ POPU ဆက်ဆံဖို့ CBT သုံးပြီးသည်အခြားချဉ်းကပ်မှု [ လုပ်. , ဒါပေမဲ့ဒီဒေသမှာအတိုင်းအတာများပြဿနာများကို reoccurring ယုံကြည်စိတ်ချရသောကောက်ချက်လုပ်ပြီး Extract မှကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးခဲ့ကြ181,182].
ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ် psychotherapy နှင့်မိသားစုကုထုံးနဲ့တူအခြားသူများစုံတွဲများအနီးကပ်ဆုံးဆက်ဆံရေး '' ကုထုံးနှင့် 12 ခြေလှမ်းအစီအစဉ်များအပြီးတွင်လုပ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ် themes များ addressing နဲ့အသုံးပြုသူများအကြားယုံကြည်မှုပြန်လည်ရသောအခါအလှနျအရေးကွီးသကျသပွေစေခြင်းငှါ '[170,172] ။ ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ရှိကွောငျးတစ်ခုတည်းသောကျပန်းထိန်းချုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး [လက်ခံနှင့်ကတိသစ္စာကုထုံး (ACT) အပေါ်အဓိကထား183], သူတို့ရဲ့ 2010 ကိစ္စတွင်စီးရီးထဲကနေတစ်တိုးတက်မှု  အထူးသ POPU ဖြေရှင်းရန်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်လေ့လာမှုပြလေ၏။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုထိရောက်သောရလာဒ်များပြသပေမယ့်နမူနာကိုထပ်သေးငယ်လွန်းခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်တိကျသောလူဦးရေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးကတည်းကပြုလုပ် extrapolate ရန်ခဲယဉ်းသည်။
CBT, conjoint ကုထုံးနှင့် ACT နှင့်အတူဖော်ပြခဲ့သည်အောင်မြင်မှုသတိနှင့်လက်ခံမှုမူဘောင်ပေါ်တွင်အခြေခံကြပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်မှီခိုမယ်; ဆက်စပ်ပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလက်ခံမှု [ညီတူညီမျှသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရေးကြီးသောယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချထက်ဖြစ်နိုင်သည်170].
4 ။ ဆွေးနွေးချက်
အဲဒါကိုလည်းမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကပါဝင်ပတ်သက်ကတည်းက POPU တဦးတည်း hypersexual ရောဂါ၏မျိုးကွဲ, ဒါပေမယ့်လက်ရှိအများဆုံးပျံ့နှံ့မသာကြောင်းကိုပုံရသည်။ ဒီတိကျစွာဒါနေရာအနှံ့ယနေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအောင်သောအမည်ဝှက်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအချက်များခက်ခဲပေးထားသောဆုံးဖြတ်ရန်ပေမဲ့ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးညစ်ညမ်းများအတွက်စားသုံးမှု၏နာယကအကြမ်းဖျင်းပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အွန်လိုင်းမူကွဲက၎င်း၏စားသုံးသူအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သဖြင့်, သုံးဆတစ်ဦးအချက်များ POPU နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်အလားအလာအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းသိရသည်ယူဆဖို့စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမည်ဝှက်ပြဿနာတစ်ခုသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် key ကိုအန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ဤပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားသိသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအသက်လူတွေကိုကန့်သတ်ထားပါသည်ဆိုတာကိုသတိရဖို့လိုပါတယ်; ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိသလောက်ဒီခုံပြီးနောက်စတင်သည်နှင့်နေဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ neurodevelopment ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရွယ်မရောက်သေးသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်လူဦးရေများမှာတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းရှိကွောငျးကိုအလွတ်မပေးပါဘူး။ သမ္မာတရားကိုရောဂါဗေဒအဘယ်အရာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသဘောတူညီမှု, အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, လုံလောက်စွာကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထုံးစံ၌ကတိုင်းတာကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပြဿနာတစ်ခု၏အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။
အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအတော်များများထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် psychosexual မကျေနပ်မှုအဖြစ်အရေးကြီးသောလက်တွေ့သရုပ်နဲ့စွဲအတိုင်းဤ entity ထောက်ခံပါတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အများစုမှာဆက်လက်စားသုံးမှုမှတဆင့်အနေနဲ့စွဲလမ်းရောဂါဖြစ်နိုင်ဟုနိုငျကွောငျး, တစ်ကယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့ '' supranormal နှိုးဆွ '' အဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲပေါ်တွင်ပြုသောအမှုအလားတူသုတေသနအပေါ်ချွတ်အခြေခံသည်။ သို့သော်သည်းခံစိတ်နှင့် abstinence တူသောသဘောတရားများသေးရှင်းလင်းစွာစွဲ၏တံဆိပ်ကပ်ထိုက်နှင့်အရှင်အနာဂတ်သုတေသန၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့လုံလောက်တဲ့ထူထောင်ကြသည်မဟုတ်။ ယခုအချိန်တွင်အဘို့, ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲကလွှမ်းခြုံနေတဲ့ရောဂါရှာဖွေ entity ကြောင့်၎င်း၏လက်ရှိလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုဖို့ ICD-11 တွင်ထည့်သွင်းထားပြီး, ထိုသို့ဧကန်အမှန်အကူအညီတောင်း Clinician မေးဖို့ဤလက္ခဏာများနှင့်အတူလူနာဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
အကဲဖြတ်ရေးကိရိယာများ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးရောဂါရှာဖွေချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပျမ်းမျှဆရာကိုကူညီတည်ရှိပေမယ့်တိကျထုံးစံ၌အမှန်တကယ်ရောဂါဗေဒသည်အဘယ်အရာ delimiting နှင့်မပါသေးတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ Carnes, Goodman နှင့် Kafka နေဖြင့်အဆိုပြုစံ၏သုံးစုံကိုတစ်ဦးအလွန်အရေးပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု core ကိုသဘောတရားတို့ပါဝင်သည်ဒီတော့ဝေး, အလွန်အကျွံအချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အခြားသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအပေါ်ခဲ့ရသည်။ အခြို့သောထုံးစံ၌သို့မဟုတ်အခြားသူတို့ပြန်လည်သုံးသပ်စိစစ် tool များ၏အများစုတွင်လည်းလက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကအပျေါမှာတညျဆောကျဖို့ရာအတွက်လုံလောက်သောဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးပါမှု၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်အခြားဒြပ်စင်များ, ဖြစ်ကောင်းအကောင့်သို့တစ်ဦးချင်းစီအချက်များယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအချက်ပြ။ ထို့အပြင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာအဆုံးအဖြတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ခြင်းသည်ဧကန်အမှန်အခငျြးခငျြးကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရကြောင်းလက်ရှိစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်, ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်း၏တဲ့အခါတိကျတဲ့အတိုင်းအတာကိုနားလည်ကူညီနောက်ထပ် neurobiological သုတေသနနှင့်အတူလက်၌သွားရလိမ့်မည်နေစဉ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချို့အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းတစ်ခုအကဲဖြတ် tool ကိုကြံစည် ဘုံလူ့အသက်ကိုတစ်ဦးရောဂါမှပုံမှန်အပြုအမူကနေပြောင်းရွှေ့ရသည်။
လက်တွေ့သရုပ် Reversible လုပ်ဖြစ်ပေါ်လာကတည်းကကုသမှုမဟာဗျူဟာသည်အဓိကရည်မှန်းချက်သည်လက်ရှိတွင်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်လုံးဝကြောင့်စွန့်ခွာအာရုံစိုက်။ ဒီအောင်မြင်ရန်လမ်းလူနာအညီကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်လည်းသတိနှင့်လက်ခံမှု-based psychotherapy ညီတူညီမျှသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရေးကြီးသောအချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦး pharmacological ချဉ်းကပ်မှုထက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသွားမည်မဟာဗျူဟာအတွက်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, require ပေလိမ့်မည်။
ရုဗင်က de Alarcón, ဗီယာဗြဲ de la Iglesia နှင့် Nerea အမ် Casado အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခကြေညာ။ AL Montejo အတိုင်ပင်ခံအခကြေးငွေသို့မဟုတ် Boehringer Ingelheim, ဖိုရမ်ဆေးဝါး, Rovi, Servier, Lundbeck, Otsuka, Janssen Cilag, Pfizer, Roche, Instituto က de Salud ကားလို့စ် III, စစ်အစိုးရက de ကာ့စ်တီက y Leon ကနေနောက်ဆုံးငါးနှစ်အတွင်း honoraria / သုတေသနထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည် ။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအသင်းမှ။ manual Diagnóstico y ကEstadísticoက de los Trastornos စိတ်ပိုင်း, 5th ed .; Panamericana: မက်ဒရစ်, Espana, 2014; စစ။ 585-589 ။ ISBN 978-84-9835-810-0 ။ [Google Scholar]
မတ်ေတာ, T က .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Hatch က L ကို .; Hajela, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ R. အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ (ဘေဆယ်) 2015, 5, 388-433 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Elmquist, ဂျေ .; Shorey, RC; အန်ဒါဆင်, S ကို .; စတူးဝပ်တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာ-မှီခိုသောလူဦးရေအတွက်အစောပိုင်း maladaptive schemas နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေး GL တစ်ဦးကပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဂျေ Subst ။ အသုံး 2016, 21, 349-354 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Chamberlain, SR; Lochner, C ကို .; Stein, DJ သမား; Goudriaan, AE; ဗန် Holst, RJ; ဇော, ဂျေ .; Grant က, je အပြုအမူစွဲ-တစ်ဦးကမြင့်တက်ဒီရေ? အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2016, 26, 841-855 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Blum K ကို .; Badgaiyan, RD; ရွှေ, က MS Hypersexuality စွဲနှင့် Withdrawal: Phenomenology, Neurogenetics နှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း။ Cureus 2015, 7, e348 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Duffy, တစ်ဦးက .; Dawson, DL; Nair, လူကြီးများအတွက် R. Das ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ: ဆိုချက်နှင့်သက်ရောက်မှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 760-777 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Karila, L ကို .; Wéry, တစ်ဦးက .; Weinstein, တစ်ဦးက .; Cottencin, အို .; အသနားခံစာ, တစ်ဦးက .; Reynaud, M က .; Billieux, ဂျေလိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ: တူညီသောပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ? စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Curr ။ Pharm ။ des ။ 2014, 20, 4012-4020 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Voon, V ကို .; မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မောရစ်, L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; Lapa, TR; Karr, ဂျေ .; Harrison, NA; Potenza, MN; et al ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS ONE 2014, 9, e102419 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wéry, တစ်ဦးက .; Billieux, ဂျေပြဿနာဘာ: Conceptual, အကဲဖြတ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2017, 64, 238-246 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Garcia က, FD; Thibaut, အက်ဖ်လိင်စွဲလမ်း။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု 2010, 36, 254-260 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Davis က, ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု RA တစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2001, 17, 187-195 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Ioannidis K ကို .; Treder, က MS; Chamberlain, SR; Kiraly, F ကို .; လာခြင်း, SA; Stein, DJ သမား; Lochner, C ကို .; Grant ကတစ်ဦးအသက်-related မျက်နှာစာပြဿနာအဖြစ် je ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: တစ် Two-site ကိုစစ်တမ်းထံမှအထောက်အထား။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2018, 81, 157-166 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Cooper က, တစ်ဦးက .; Delmonico, DL; Griffin-Shelley, E ကို .; Mathis, RM အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်: Potentially ပြဿနာအပြုအမူတစ်ခုကစာမေးပွဲ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2004, 11, 129-143 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Döring, လိင်အပေါ်မိုင်အင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှု: သုတေသန 15 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2009, 25, 1089-1101 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Fisher က, WA, ဗာရက်, အေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အင်တာနက်ကိုလိင်အပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်အမြင်။ ဂျေလိင်။ res ။ 2001, 38, 312-323 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Janssen, E ကို .; လက်သမား, D ကို .; ဂရေဟမ်,, CA လိင်သုတေသနအတွက်ဇာတ်ကားတွေကိုရွေးချ: ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင် preference ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2003, 32, 243-251 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Ross ကမီဂါဝပ်; Månsson, အက်စ်-တစ်ဦးက .; Daneback, K. ပျံ့နှံ့နေတဲ့, ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Correlate ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2012, 41, 459-466 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Riemersma, ဂျေ .; Sytsma, လိင်စွဲလမ်း၏အမ်တစ်ဦးကနယူးမျိုးဆက်။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2013, 20, 306-322 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Beyens ငါ .; Eggermont, အက်စ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကြားတွင်စာသား-အခြေခံပြီးနှင့်အမြင်အားဖြင့် ပို. အကဲဆတ်သောကျဘာ၏ခန့်မှန်း။ Young က 2014, 22, 43-65 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Rosenberg က, H ကို .; Kraus, အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူညစ်ညမ်းအတွက် "အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု" ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1012-1017 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ကိန်း, အိပ်ချ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 2108-2109 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cooper က, အေလိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ CyberPsychol ။ ပြုမူနေ။ 1998, 1, 187-193 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cooper က, တစ်ဦးက .; Scherer, CR; Boies, SC; Gordon ကမြင်ပါတယ်, အင်တာနက်ပေါ်မှာ BL လိင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေး မှစ. ရောဂါဗေဒစကားရပ်ဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခ Psychol ။ res ။ Pract ။ 1999, 30, 154-164 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Harper ကို, ကို C .; တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုဆက်စပ်မှုဆန်းစစ် Hodgins, DC က။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 179-191 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Pornhub Insights: ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် 2017 တစ်နှစ်တာ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: https://www.pornhub.com/insights/2017-year-in-review (15 ဧပြီလ 2018 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Litras, တစ်ဦးက .; Latreille, S ကို .; ဗိမာနျတျော-Smith ကအမ်ဒေါက်တာ Google က porn နှင့်မိတ်ဆွေတစ်-of-a-မိတျဆှေ: ဘယ်မှာလုလင်တို့ကယ့်ကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်လာပြီလဲ? လိင်။ ကျန်းမာရေး 2015, 12, 488-494 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Zimbardo, P ကို ​​.; Wilson က, G .; Porn သင့်ယောက်ျားပီနှင့်အတူ Messing ပုံ Coulombe, N. ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: https://www.skeptic.com/reading_room/how-porn-is-messing-with-your-manhood/ (25 မတ်လ 2020 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Pizzol, D ကို .; Bertoldo, တစ်ဦးက .; Foresta, C. ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ် porn: လိင်၏ခေတ်သစ်။ int ။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ ကျန်းမာရေး 2016, 28, 169-173 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Prins, ဂျေ .; Blanker, MH; Bohnen, Am, သောမတ်စ်, S ကို .; Bosch ရဲ့, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ JLHR ပျံ့နှံ့နေတဲ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2002, 14, 422-432 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mialon, တစ်ဦးက .; Berchtold, တစ်ဦးက .; Michaud, P. -တစ်ဦးက .; Gmel, G .; Suris, J.-C. ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကျန်းမာရေး 2012, 51, 25-31 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
O'Sullivan, LF; Brotto, LA က; Byers, ES; Majerovich ဂျေ; Wuest ဂျေအေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်မှလိင်အတွေ့အကြုံရှိအလယ်တန်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 630-641 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wilcox, SL; Redmond, S ကို .; ဟာဆန်, စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် pm တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ: ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 2537-2545 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Landripet ငါ .; Štulhofer, အေ Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated လား? ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1136-1139 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wright, PJUS ယောက်ျားနှင့်ညစ်ညမ်း, 1973-2010: စားသုံးမှု, ခန့်မှန်း, Correlate ။ ဂျေလိင်။ res ။ 2013, 50, 60-71 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
စျေး, ဂျေ .; ပက်တာ, R ကို .; Regnerus, M က .; XXX ကမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ X ကိုစားသုံးသူဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအများကြီးပို Walley, ဂျေ? 1973 ကတည်းကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Related ပြောင်းခြင်းသဘောထားနှင့်အပြုအမူ၏သက်သေအထောက်အထား။ ဂျေလိင် Res ။ 2015, 53, 1-9 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Najavits, L ကို .; အဆုတ်, ဂျေ .; Froias, တစ်ဦးက .; Paull, N ကို .; ဘေလီ, G. အတစ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနမူနာအတွက်မျိုးစုံအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Subst ။ တလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုသုံးပါ 2014, 49, 479-484 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Ballester-Arnal, R ကို .; ကက်စထရို Calvo, ဂျေ .; gil-Llario, MD, gil-ဂျူလီယာ, ခကျဘာစွဲ: စပိန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအပေါ်တစ်ဦးကလေ့လာမှု။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2017, 43, 567-585 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Rissel, C ကို .; ရစ်ချတာ, ဂျေ .; Visser, ro က de; McKee, တစ်ဦးက .; Yeung, တစ်ဦးက .; Caruana, T. သြစတြေးလျအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile: ကျန်းမာရေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ဒုတိယအချက်သြစတြေးလျလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်။ ဂျေလိင်။ res ။ 2017, 54, 227-240 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Skegg K ကို .; Nada-Raja, S ကို .; Dickson, N ကို .; ပေါလုသည် C. "ထိန်းချုပ်ရေးထဲက" ဟုဒါနီးဒင် Multidisciplinary ကနျြးမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလေ့လာမှုကနေလူငယ်လူကြီးများတစ်ဦးအလိုက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခံစား။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2010, 39, 968-978 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Štulhofer, တစ်ဦးက .; Jurin, T က .; Briken, P. အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အမျိုးသား Hypersexuality ၏အသှငျအပွငျရှိပါသလား? တစ်အွန်လိုင်းလေ့လာမှုကနေရလာဒ်။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2016, 42, 665-680 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Frangos, CC ကို; Frangos, CC ကို; Sotiropoulos, ဂရိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားဗြဲပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: အန္တရာယ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်၏အကြောင်းရင်းများ, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေနဲ့ထုံးစံ Logistic ဆုတ်ယုတ်။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2011, 14, 51-58 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
တတ်ကြ၏, JM; Fernandez-Aranda, F ကို .; Granero, R ကို .; Aragay, N ကို .; Mallorquí-Bague, N ကို .; Ferrer, V ကို .; ပိုများသော, တစ်ဦးက .; Bouman, WP; Arcelus, ဂျေ .; Savvidou, LG က; et al ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်လောင်းကစားရောဂါ: အလားတူနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2015, 56, 59-68 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kafka, အမတ် Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2010, 39, 377-400 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kaplan, က MS; Krueger, RB Diagnosis, အကဲဖြတ်ခြင်း, hypersexuality ၏ဆက်ဆံမှု။ ဂျေလိင်။ res ။ 2010, 47, 181-198 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရိဒ်, RC တစ်ဦးစွဲအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခွဲခြားအတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 2111-2113 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Gola, M က .; Lewczuk K ကို .; Skorko, အမ်ကဘာလဲ Matters: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူအချက်များ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 815-824 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရိဒ်, RC; လက်သမား, BN; ချိတ်, ဖြစ်မှု; Garo, S ကို .; Manning, JC; Gilliland, R ကို .; Cooper က, eb; McKittrick, H ကို .; Davtian, M က .; Fong သည်, hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်များ၏တီအစီရင်ခံစာ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2012, 9, 2868-2877 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Bancroft, ဂျေ .; Vukadinovic, Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ ဂျေလိင်။ res ။ 2004, 41, 225-234 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bancroft "ထိန်းချုပ်မှုထဲက" ကြောင်းဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသီအိုရီအယူအဆချဉ်းကပ်။ Psychiatric ။ Clin ။ N. Am ။ 2008, 31, 593-601 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Stein, DJ သမား; အနက်ရောင်, DW; Pienaar, ဒဗလျူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါ: compulsive, စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ်ထကြွလွယ်သော? CNS Spectr ။ 2000, 5, 60-64 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kafka, အမတ်, Prentky, RA compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997, 154, 1632 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kafka, အမတ် hypersexual ရောဂါမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 1259-1261 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Krueger, hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ RB Diagnosis အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 2110-2111 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, R ကို .; Kafka, အမ်ငြင်း Hypersexual Disorder နှင့် DSM-5 အကြောင်းကို။ Curr ။ လိင်။ ကနျြးမာရေးကိုယ်စားလှယ်။ 2014, 6, 259-264 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kor, တစ်ဦးက .; Fogel, Y ကို .; ရိဒ်, RC; Potenza, MN သင့် Hypersexual Disorder တစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားရမည်လော လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2013, 20, 27-47 ။ [Google Scholar]
Coleman, အီး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေသင့်ရဲ့လူနာဆငျးရဲဒုက်ခလား? Psychiatric ။ အမ်း။ 1992, 22, 320-325 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Coleman, E ကို .; Raymond, N ကို .; McBean, အေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆက်ဆံမှု။ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ။ Med ။ 2003, 86, 42-47 ။ [Google Scholar] [PubMed]
Kafka, အမတ်, Prentky, ယောက်ျားအတွက် nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ၏ R. တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 1992, 53, 345-350 ။ [Google Scholar] [PubMed]
Derbyshire, KL; Grant က, je compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2015, 4, 37-43 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kafka, အမတ်, Hennen, ဂျေအဆိုပါ paraphilia-related မမှန်: ပြင်ပလူနာယောက်ျားအတွက် nonparaphilic hypersexuality မမှန်၏ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1999, 25, 305-319 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
compulsive, ထကြွလွယ်သော, နှင့်စွဲလမ်းမော်ဒယ်များ: hypersexual မမှန်ခွဲခြား Stein, DJ သမား။ Psychiatric ။ Clin ။ N. Am ။ 2008, 31, 587-591 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Lochner, C ကို .; Stein, DJ သမား obsessive-compulsive ရောဂါများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်ပေါ်တွင်အလုပ်အထောက်အကူပြုပါသလား? prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2006, 30, 353-361 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Barth, RJ; ကြင်နာတက်, BN လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ mislabeling ။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1987, 13, 15-23 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Stein, DJ သမား; Chamberlain, SR; Fineberg, အလေ့အထရောဂါ၏ N. တစ်ခုက ABC ရုပ်သံမော်ဒယ်: ဆံပင်ဆွဲတာ, အရေပြား-Pick နှင့်အခြားကျပုံစံအခြေအနေများ။ CNS Spectr ။ 2006, 11, 824-827 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Goodman, အေစွဲခြင်းရောဂါ: တစ်ဦးပေါင်းစည်းချဉ်းကပ်: အပိုင်းတစ်ခုမှာ-တစ်ဦးပေါင်းစည်းနားလည်မှု။ ဂျေဝန်ကြီးများ။ စှဲလမျးသူ။ Recover ။ 1995, 2, 33-76 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Carnes, PJ လိင်စွဲလမ်းနှင့်မလှူ: အသိအမှတ်ပြု, ကုသမှု, နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ CNS Spectr ။ 2000, 5, 63-72 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Potenza, MN ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008, 363, 3181-3189 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Orzack, MH; Ross က CJ သင့်ရဲ့ Virtual လိင်အခြားလိင်စွဲလိုပဲဆက်ဆံခံရ? လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2000, 7, 113-125 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Zitzman, ST; ဘတ္သည်အရွယ်ရောက် Pair ကို-ဘွန်းဆက်ဆံရေးအတွက်နှောင်ကြိုးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် Concomitant လှညျ့စားခွငျး MH ဇနီး '' အချင်းယောက်ျား၏အတွေ့အကြုံ '' ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2009, 16, 210-240 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Rosenberg က, KP; O'Connor, S ကို .; Carnes, P. အခန်း 9-လိင်စွဲ: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ * တွင် အမူအကျင့်စွဲစေ; Rosenberg က, KP, Federal, LC, Eds .; ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း: San Diego မှ,, CA, USA, 2014; စစ။ 215-236 ။ ISBN 978-0-12-407724-9 ။ [Google Scholar]
Kraus, SW; Voon, V ကို .; Kor, တစ်ဦးက .; Potenza, MN ရွှံ့ရေထဲမှာရှင်းလင်းပြတ်သားရှာဖွေခြင်း: တစ်ခုစွဲအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခွဲခြားများအတွက်အနာဂတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 2113-2114 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Grant က, je; Chamberlain, စွဲလမ်း၏အဓိပ္ပါယ်ချဲ့ထွင် SR: ICD-5 vs. DSM-11 ။ CNS Spectr ။ 2016, 21, 300-303 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wéry, တစ်ဦးက .; Karila, L ကို .; de Sutter, P ကို ​​.; Billieux, ဂျေ Conceptualisation, အကဲဖြတ် et traitement de la မူတည် cybersexuelle: Une revue de la littérature။ နိုင်သလား။ Psychol ။ 2014, 55, 266-281 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Chaney, အမတ်, လိင်တူဆက်ဆံသူကားအဘယ်သူလိင် compulsive လူအနှင်း, BJ အွန်လိုင်းတွေ့ကြုံမှုများ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2003, 10, 259-274 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Schimmenti, တစ်ဦးက .; Caretti, V. အကြားအမြင်ရဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်တွင်း? စိတ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစွဲ၏မခံနိုင်သောပြည်နယ်များ။ Psychoanal ။ Psychol ။ 2010, 27, 115-132 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Griffiths က, MD ကအင်တာနက်လိင်စွဲ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ စှဲလမျးသူ။ res ။ သဘောတရား 2012, 20, 111-124 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Navarro-Cremades, F ကို .; Simonelli, C ကို .; DSM-5 ကျော်လွန် Montejo, AL လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်: အဆိုပါမပြီးဆုံးသေးသောရေးရာ။ Curr ။ Opin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2017, 30, 417-422 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kraus, SW; Krueger, RB; Briken, P ကို ​​.; ပထမဦးစွာကို MB; Stein, DJ သမား; Kaplan, က MS; Voon, V ကို .; Abdo, CHN; Grant က, je; Atalla, E ကို .; et al ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2018, 17, 109-110 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hyman, SE, Andrews က, G .; Ayuso-Mateo, JL; Gaebel, W .; Goldberg, D ကို .; Gureje, အို .; Jablensky, တစ်ဦးက .; Khoury, B, .; Lovell, တစ်ဦးက .; မက်ဒီနာ Mora, ME, et al ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်များ၏ ICD-10 ခွဲခြား၏တည်းဖြတ်မူများအတွက်တစ်ဦးကအယူအဆရေးရာမူဘောင်။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2011, 10, 86-92 ။ [Google Scholar]
ပန်းခြံ, BY; Wilson က, G .; Berger, ဂျေ .; Christman, M က .; Reina, B, .; ဆရာတော်, F ကို .; Klam, WP; Doan, AP အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေပါသလား လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ (ဘေဆယ်) 2016, 6, 17 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wilson က, G. အ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှင်းလင်း။ Addicta တူရကီဂျေစွဲ။ 2016, 3, 209-221 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Blais-Lecours, S ကို .; Vaillancourt-Morel, အမ်-P ကို ​​.; Sabourin, S ကို .; Godbout, N. Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2016, 19, 649-655 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မစ္စအောလ်ဘရိုက်, America မှာ JM လိင်အွန်လိုင်း: အင်တာနက်လိင်ရှာနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုရှိလိင်၏တူးဖော်ရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ။ ဂျေလိင်။ res ။ 2008, 45, 175-186 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Minarcik, ဂျေ .; Wetterneck, မှန် CT; က Short, MB အထိရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 700-707 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Pyle, TM အလိုအလျောက်; ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများတံတားများ, AJ သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာ: Comparing ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2012, 1, 171-179 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ပြင်သစ်, IM; Hamilton က, ld အမျိုးသား-ဗဟိုပြုနှင့်အမျိုးသမီး-ဗဟိုပြုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု: လူငယ်လူကြီးများအတွက်လိင်ဘဝနှင့်သဘောထားတွေဆက်ဆံရေး။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2018, 44, 73-86 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Starcevic, V ကို .; အပြုအမူစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ Disorders အကြား Khazaal, Y. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး: အဘယ်အရာကိုလူသိများသည်နှင့်သျောလညျးအဘယျသို့သင်ယူခံရဖို့လား? တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2017, 8, 53 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mitra, M က .; Rath, Rourkela-တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းကိုသားသမီးများ၏ psychosomatic ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက် P. Effect ။ အိန္ဒိယဂျေကလေးကျန်းမာရေး 2017, 4, 289-293 ။ [Google Scholar]
Voss, တစ်ဦးက .; ငွေသား, H ကို .; Hurdiss, S ကို .; ဆရာတော်, F ကို .; Klam, WP; Doan, AP ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ။ ယေးလ်ဂျေ Biol ။ Med ။ 2015, 88, 319-324 ။ [Google Scholar]
Stockdale, L ကို .; Coyne, ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက် SM ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲ: လိုက်ဖက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲများတွင်ရောဂါဗေဒ၏ Cross-Section သက်သေအထောက်အထား။ ဂျေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ disorders ။ 2018, 225, 265-272 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Grubbs, JB, ဂျေတျောမူမညျ; Exline, JJ; အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း Pargament, KI: Self-ဖော်ပြခဲ့သည် "စွဲ" ကိစ္စပါသလား စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2018, 82, 57-64 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Vilas, D ကို .; ပိုတငျး-Sunyer, C ကို .; ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Tolosa, အီး Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ ပါကင်ဆက်ဆံရေး။ disorders ။ 2012, 18, S80-S84 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Poletti, M က .; Bonuccelli, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် U. Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သိမြင်မှုအဆင့်အတန်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ Neurol ။ 2012, 259, 2269-2277 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဟီလ်တန်, neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား DL ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ-တစ်ဦးက supranormal နှိုးဆွ။ Socioaffect ။ neuroscience ။ Psychol ။ 2013, 3, 20767 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Volkow, ND; Koob, gf; Neurobiologic ကို AT McLellan, စွဲမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ်ကနေတိုးတက်လာ။ N. Engl ။ ဂျေ Med ။ 2016, 374, 363-371 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Vanderschuren, LJMJ; ပီယပ်, RC အသိမြှမူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာ process လုပ်တယ်။ Curr ။ ထိပ်တန်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2010, 3, 179-195 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; မုဆိုး, JS; Tomasi, D ကို .; Telang, F ကို .; Baler, R. စွဲ: sensitivity ကိုတိုးပှားမျှော်လင့် sensitivity ကိုဦးနှောက်ရဲ့ control circuit ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပရိယာယ်ပြုမည်ဆုချယုတ်လျော့လေ၏။ Bioessays 2010, 32, 748-755 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
စတိန်း, RZ; Volkow, စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ ND အလုပ်မဖြစ်: Neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2011, 12, 652-669 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Koob, gf စွဲနေတဲ့ဆုကြေး Deficit ဖြစ်ပြီး Surfeit Disorder စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျ။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2013, 4, 72 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mechelmans, DJ သမား; Irvine, M က .; BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; မှဲ့, တီဘီ, Lapa, TR; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, V. နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု Enhanced ။ PLoS ONE 2014, 9, e105476 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
seok, ဂျေ-W .; Sohn, J.-H. ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2015, 9, 321 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
လူ့ amygdala များ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက် Hamann, အက်စ်လိင်ကွဲပြားမှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 2005, 11, 288-293 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Klucken, T က .; Wehrum-Osinsky, S ကို .; Schweckendiek, ဂျေ .; Kruse, အို .; compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် Stark, R. ALTER အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 627-636 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Sescousse, G .; Caldú, X ကို .; Segura, B, .; Dreher, J.-C. မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်၏ processing: လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုတစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013, 37, 681-696 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Fong သည်, T က .; Prause, N. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffect ။ neuroscience ။ Psychol ။ 2013, 3, 20770 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဟီလ်တန်, DL '' အမြင့်အလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Socioaffect ။ neuroscience ။ Psychol ။ 2014, 4။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Sabatinelli, D ကို .; Hajcak "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ G. အ Modulation ။ Biol ။ Psychol ။ 2015, 109, 192-199 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အမ်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2014, 17, 505-511 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ပါ။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2015, 18, 575-580 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Stark, R ကို .; Klucken, T. Neuroscientific (အွန်လိုင်း) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဖို့ချဉ်းကပ်။ တွင် အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု; အာရုံကြောသိပ္ပံ, စိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လေ့လာစရာများ; Springer: Cham, ဆွစ်ဇာလန်, 2017; စစ။ 109-124 ။ ISBN 978-3-319-46275-2 ။ [Google Scholar]
Albery, အိုင်ပီ; လောရီ, ဂျေ .; မြိတ်, D ကို .; ဂျွန်ဆင်, HL; Hogan, C ကို .; လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးအလိုက်အတွက်လိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး Exploring မော့စ်, AC အ။ အီးယူအာရ်။ စှဲလမျးသူ။ res ။ 2017, 23, 1-6 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kunaharan, S ကို .; Halpin, S ကို .; Sitharthan, T က .; Bosshard, S ကို .; Walla, Emotion ၏ P. အသိပညာပေနှင့် Non သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? Apple က။ သိပ္ပံ။ 2017, 7, 493 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Kühn, S ကို .; Gallinat, ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014, 71, 827-834 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
BANCA, P ကို ​​.; မောရစ်, LS, မစ်ချယ်, S ကို .; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, V. ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 2016, 72, 91-101 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
BANCA, P ကို ​​.; Harrison, NA; Voon, ထိုရောဂါဗေဒဆေးဝါးတလွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များရဲ့တစ်ဖက်မှာ V. compulsive ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2016, 10, 154 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Gola, M က .; Wordecha, M က .; Sescousse, G .; Lew-Starowicz, M က .; Kossowski, B, .; Wypych, M က .; Makeig, S ကို .; Potenza, MN; Marchewka, အေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာပါ။ Neuropsychopharmacology 2017, 42, 2021-2031 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Schmidt က, C ကို .; မောရစ်, LS, Kvamme, TL; ခန်းမ, P ကို ​​.; Birchard, T က .; Voon, V. compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 2017, 38, 1182-1190 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Snagowski, ဂျေ .; Laier, C ကို .; Maderwald, အက်စ် Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 2016, 129, 224-232 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Balodis, IM; Potenza, စွဲလူဦးရေအတွက် MN Anticipatory ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့: အငွေကြေးဆိုင်ရာမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံစိုက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2015, 77, 434-444 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
seok, ဂျေ-W .; Sohn, J.-H. မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2018, 1684, 30-39 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Taki, Y ကို .; Kinomura, S ကို .; Sato, K သည် .; goto, R ကို .; Inoue K ကို .; Okada K ကို .; Ono, S ကို .; Kawashima, R ကို .; တစ်ဦးကထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး voxel-based morphometry: ဖူကူ, အိပ်ချ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဒေသတွင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အဆိုး Non-အရက်-မှီခိုဂျပန်အမျိုးသားများတွင်တစ်သက်တာအရက်စားသုံးမှုနှင့်အတူပတျသကျ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 2006, 30, 1045-1050 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Chatzittofis, တစ်ဦးက .; Arver, S ကို .; Öberg K ကို .; Hallberg, ဂျေ .; Nordstrom, P ကို ​​.; Jokinen, hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဂျေ HPA ဝင်ရိုး dysregulation ။ Psychoneuroendocrinology 2016, 63, 247-253 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Jokinen, ဂျေ .; Boström, AE; Chatzittofis, တစ်ဦးက .; Ciuculete, DM; Öberg, KG, Flanagan, ဖြစ်မှု; Arver, S ကို .; Schiöth, hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး related မျိုးဗီဇ၏ HB methyl ။ Psychoneuroendocrinology 2017, 80, 67-73 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Blum K ကို .; Werner, T က .; Carnes, S ကို .; Carnes, P ကို ​​.; Bowirrat, တစ်ဦးက .; Giordano, ဂျေ .; အော်စကာ Berman, M က .; ရွှေ, အမ်လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ်ဟာ "n" လိပ်: ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic တစ် function ကိုအဖြစ်ဘုံ mesolimbic activation Hypothesizing ။ ဂျေ Psychoact ။ မူးယစ်ဆေးဝါး 2012, 44, 38-55 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Jokinen, ဂျေ .; Chatzittofis, တစ်ဦးက .; Nordstrom, P ကို ​​.; Arver, အက်စ် hypersexual ရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် neuroinflammation ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychoneuroendocrinology 2016, 71, 55 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; Karim က, R ကို .; McCrory, E ကို .; လက်သမား, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလူတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာအတွက် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် BN ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု။ int ။ ဂျေ neuroscience ။ 2010, 120, 120-127 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Leppink, E ကို .; Chamberlain, S ကို .; လာခြင်း, S ကို .; Grant ကလူငယ်လူကြီးများအတွက်ဂျေပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကိုဖြတ်ပြီးအစည်းအရုံးများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2016, 246, 230-235 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kamaruddin, N ကို .; Rahman က AWA; Handiyani, Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ်အပေါ်အခြေခံပြီးဃညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲထောက်လှမ်းခြင်း။ Indones ။ ဂျေ Electric ။ eng ။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ သိပ္ပံ။ 2018, 10, 138-145 ။ [Google Scholar]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Schächtle, ဦး .; Schöler, T က .; Altstötter-Gleich အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်, C. : အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းက္ပ။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2011, 14, 371-377 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Schulte, လက်ဗွေ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူနှောင့်ယှက်။ ဂျေလိင်။ res ။ 2013, 50, 642-652 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မိုင်းလုပ်သား, MH; Raymond, N ကို .; Mueller, BA ဘွဲ့; လွိုက်, M က .; Lim ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ KO ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009, 174, 146-151 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Cheng, W .; Chiou, W.-B. အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျမှ exposure ။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2017, 21, 99-104 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Messina, B, .; Fuentes, D ကို .; Tavares, H ကို .; Abdo, CHN; Scanavino, လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive လူ MDT အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံခြင်းမပြုမီကာခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုအကဲခတ်ပြီးနောက်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2017, 14, 347-354 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Negash, S ကို .; Sheppard, NVN; လမ်းဘတ်, မိုင်, လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုများအတွက် Fincham, FD ထရေးဒင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့စျေး။ ဂျေလိင်။ res ။ 2016, 53, 689-700 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Sirianni, JM; Vishwanath, အေပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: တစ်ဦးကမီဒီယာတက်ရောက်အမြင်။ ဂျေလိင်။ res ။ 2016, 53, 21-34 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Pekal, ဂျေ .; Schulte, လက်ဗွေ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2013, 2, 100-107 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; လူငယ်တို့, KS; Laier, C. Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်များ၏သီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience ။ 2014, 8, 375 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Snagowski, ဂျေ .; Wegmann, E ကို .; Pekal, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲထဲမှာအမ် Implicit အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ် Implicit အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2015, 49, 7-12 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Snagowski, ဂျေ .; Laier, C ကို .; Duka, T က .; ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့အမှတ်တံဆိပ်, အမ် Subject တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2016, 23, 342-360 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ဝေါ်လ်တန်, MT; Cantor, JM; ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ Lykins, အေဒီတစ်ခုကအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2017, 46, 721-733 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Parsons, JT; ကယ်လီ, ဘီစီ; Bimbi, DS, Muench, F ကို .; Morgenstern, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏လူမှုရေးအစပျိုးခြင်းအဘို့အဂျေစာရင်းကိုင်။ ဂျေစွဲ။ dis ။ 2007, 26, 5-16 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်အမ် Mood အပြောင်းအလဲများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုဆက်စပ်နေကြသည်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ rep ။ 2017, 5, 9-13 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ကိုလက်တွေ့အထောက်အထားနှင့်တစ်ဦးသိမှု-အပြုအမူကြည့်ရန်ထံမှဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်သီအိုရီစဉ်းစားပါ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2014, 21, 305-321 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Anton, S ကို .; အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်စရိုက်များနှင့်ပြည်နယ် Impulse ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2018, 79, 171-177 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Egan, V ကို .; Parmar, R. Dirty အလေ့အထများ? အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, obsessionality နှင့် compulsive ။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2013, 39, 394-409 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Werner, M က .; Štulhofer, တစ်ဦးက .; Waldorp, L ကို .; Jurin, Hypersexuality မှ T. တစ်ဦးက Network ကိုချဉ်းကပ်: Insights နှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2018, 15, 373-386 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Snagowski, ဂျေ .; ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ: အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲ၏အမ်ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 2015, 6, 653 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Schiebener, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ညစ်ညမ်းအတူ flyer ပဲရှိသေး? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2015, 4, 14-21 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Brem, MJ; Shorey, RC; အန်ဒါဆင်, S ကို .; စတူးဝပ်, GL စီးပွားပျက်ကပ်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်လူနေအိမ်ကုသမှုလူတို့တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ Clin ။ Psychol ။ Psychother ။ 2017, 24, 1246-1253 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Carnes, P. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစိစစ်စမ်းသပ်။ Tenn ။ သူနာပြု 1991, 54, 29 ။ [Google Scholar]
Hypersexual Disorder ၏ Montgomery-ဂရေဟမ်, အက်စ် Conceptual နှင့်အကဲဖြတ်: အစာပေ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ လိင်။ Med ။ ဗျာ 2017, 5, 146-162 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မိုင်းလုပ်သား, MH; Coleman, E ကို .; စင်တာ, BA ဘွဲ့; Ross က M ကို .; Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ: Rosser က The compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်း BRS ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2007, 36, 579-587 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မိုင်းလုပ်သား, MH; Raymond, N ကို .; Coleman, E ကို .; အဆိုပါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory အပေါ်ဆေးခန်းနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအသုံးဝင်သောဖြတ်အမှတ်စုံစမ်းစစ်ဆေး Swinburne Romine, R. ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2017, 14, 715-720 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Öberg, KG, Hallberg, ဂျေ .; Kaldo, V ကို .; Dhejne, C ကို .; ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ် Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူအကူအညီ-ရှာဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory အဆိုအရ Arver, အက်စ် Hypersexual Disorder ။ လိင်။ Med ။ 2017, 5, e229-e236 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Delmonico, D ကို .; Miller ကဂျေအင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်: Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ လိင်။ Relatsh ။ Ther ။ 2003, 18, 261-276 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Ballester Arnal, R ကို .; gil Llario, MD, ဂိုမက်ဇမာတီနက်စ်၏, S ကို .; gil Julia, ဆိုက်ဘာ-လိင်စွဲအကဲဖြတ်များအတွက်တူရိယာ၏ခ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psicothema 2010, 22, 1048-1053 ။ [Google Scholar]
Beutel, ME, Giralt, S ကို .; Wölfling K ကို .; Stöbel-ရစ်ချတာ, Y ကို .; Subic-Wrana, C ကို .; Reiner ငါ .; Tibubos, AN; Brähler, အီးပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဂျာမန်လူဦးရေတွင်အွန်လိုင်း-လိင်အသုံးပြုမှုပြဌာန်းခွင့်။ PLoS ONE 2017, 12, e0176449 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kor, တစ်ဦးက .; Zilcha-Mano မှ, S ကို .; Fogel, YA; Mikulincer, M က .; ရိဒ်, RC; Potenza, ထိုပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏ MN Psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 861-868 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wéry, တစ်ဦးက .; Burnay, ဂျေ .; Karila, L ကို .; အတည်ပြုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Preferences ကိုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူ Links များ: Billieux, ဂျေအဆိုပါက Short ပြင်သစ်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှ Adapted ။ ဂျေလိင်။ res ။ 2016, 53, 701-710 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Grubbs, JB, Volk, F ကို .; Exline, JJ; Pargament, KI အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: ခံစားစွဲ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အကျဉ်းအတိုင်းအတာ၏အတညျပွု။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 83-106 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဖာနန်ဒက်ဇ, DP; Tee, EYJ; ဖာနန်ဒက်ဇ, EF Do ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2017, 24, 156-179 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
နှစ်ဦးစလုံး, B, .; Tóth-Királyငါ .; Zsila, Á .; Griffiths က, MD, Demetrovics, Z ကို .; Orosz, ထိုပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး၏ G. အဒီဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (PPCS) ။ ဂျေလိင်။ res ။ 2018, 55, 395-406 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Griffiths ကတစ် Biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏အမ်တစ်ဦးက "Components" မော်ဒယ်။ ဂျေ Subst ။ အသုံး 2009, 10, 191-197 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ရိဒ်, RC; လီ, DS, Gilliland, R ကို .; Stein ဂျေ; Fong သည်, T. ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တရားဝင်မှုနှင့် hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစာရင်း၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2011, 37, 359-385 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Baltieri, DA, Aguiar, ASJ; de Oliveira, VH; ; Souza Gatti, AL က de က de Souza Aranha E ကိုဆေးလ်ဗား, အမျိုးသားဘရာဇီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတစ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory ၏ RA အတည်ပြုခြင်း။ ဂျေလိင်။ အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 649-660 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Noor, SW; ရှိမုနျကို Rosser, BR, နိုင်ကြောင်း, ပြဿနာလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာစားသုံးမှုတိုင်းမှ DJ သမားတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်စကေး: အ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (CPC) ၏ Psychometric Properties ကိုအမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ရှိသည်သောယောက်ျားတို့တွင်အတိုက်ဖျက်ရေး။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2014, 21, 240-261 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, S ကို .; Rosenberg က, အိပ်ချ်အဆိုပါညစ်ညမ်းတဏှာမေးခွန်းလွှာ: Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 451-462 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Rosenberg က, H ကို .; Tompsett, Self-အစပျိုးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု-လျှော့ချရေးမဟာဗျူဟာ employ မှ Self-ထိရောက်မှု၏ CJ အကဲဖြတ်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2015, 40, 115-118 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Rosenberg က, H ကို .; Martino, S ကို .; niche, C ကို .; Potenza, MN ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-အသုံးပြုခြင်းရှောင်ရှားကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုစကေး၏ကနဦးအကဲဖြတ်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2017, 6, 354-363 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Sniewski, L ကို .; Farvid, P ကို ​​.; Carter က, P. Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်လိင်ကွဲယောက်ျား၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှု: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2018, 77, 217-224 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Gola, M က .; Potenza, ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု MN Paroxetine ကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 529-532 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Fong သည်, TW နားလည်မှုနဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု (Edgmont) 2006, 3, 51-58 ။ [Google Scholar]
Aboujaoude, E ကို .; Naltrexone wo salam: တစ်ဦးကပန်-စွဲကုသမှု? CNS မူးယစ်ဆေးဝါး 2016, 30, 719-733 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Raymond, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား; Grant က, je; Coleman, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ဆံဖို့ naltrexone နှင့်အတူအီးတိုးပွား: တစ်ဦးကအမှုစီးရီး။ အမ်း။ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2010, 22, 56-62 ။ [Google Scholar]
Kraus, SW; Meshberg-Cohen ကို, S ကို .; Martino, S ကို .; Quinones, LJ; Potenza, Naltrexone နှင့်အတူ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု MN ကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015, 172, 1260-1261 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bostwick, JM; Bucci, naltrexone နဲ့ကုသဂျေအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo အဘိဓါန် Clin ။ proc ။ 2008, 83, 226-230 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Camacho, M က .; Moura, AR; Oliveira-Maia, Naltrexone Monotherapy နဲ့ကုသ AJ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Prim ။ အဖော် CNS disorders ဂရုမစိုက်။ 2018, 20။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
comorbid ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ကုသမှုများအတွက် Capurso, NA Naltrexone ။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 2017, 26, 115-117 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
က Short, ကို MB; Wetterneck, မှန် CT; Bistricky, SL; shutter, T က .; Chase, TE Clinician '' ယုံကြည်ချက်, လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် Clients တွေအနေနဲ့နှင့်စပ်လျဉ်းကုသမှုထိရောက်မှု '' လိင်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း။ Community ။ Ment ။ ကနျြးမာရေးဂျေ 2016, 52, 1070-1081 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Orzack, MH; Voluse, AC အ; ဝံပုလွေ, D ကို .; Hennen, ပြဿနာကအင်တာနက်-enabled လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူအုပျစုကုသမှုဂျေတစ်ခုကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှု။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ 2006, 9, 348-360 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
လူငယ်တို့, အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူ KS သိမှုအပြုအမူကုထုံး: ကုသမှုရလဒ်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ 2007, 10, 671-679 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hardy, SA; Ruchty, ဂျေ .; Hull, T က .; Hyde, Hypersexuality များအတွက်အွန်လိုင်း Psychoeducational အစီအစဉ်၏ R. တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာပါ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 2010, 17, 247-269 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Crosby သည်, JM; Twohig, အမတ်လက်ခံနှင့်ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကတိသစ္စာကုထုံး: ကျပန်းစမ်းသပ်။ ပြုမူနေ။ Ther ။ 2016, 47, 355-366 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Twohig, အမတ်, ပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်များအတွက်ကုသမှုအဖြစ် Crosby သည်, JM လက်ခံနှင့်ကတိကဝတ်ကုထုံး။ ပြုမူနေ။ Ther ။ 2010, 41, 285-295 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
©စာရေးသူအားဖြင့် 2019 ။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ MDPI, ဘေဆယ်, ဆွစ်ဇာလန်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါကို Creative Commons Attribution (CC ကို BY) လိုင်စင် (၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).